ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာကြည့်ခြင်း“ ပြန်လည်စတင်ခြင်း” အတွေ့အကြုံ - အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲဆိုခြင်းဖိုရမ် (၂၀၂၁) တွင်ရှိသော Abstinence Journals များကိုအရည်အသွေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း - သင်တို့၏ ဦး နှောက်သည်
Comment: အလွန်ကောင်းမွန်သောစက္ကူသည် rebooting အတွေ့အကြုံ ၁၀၀ ကျော်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးဖိုရမ်များတွင်လူများကြုံတွေ့နေရသောအရာများကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ ပြန်လည်နာလန်ထူရေးဖိုရမ်များနှင့်ပတ်သက်သောဝါဒဖြန့်ချိမှုအများစုနှင့်ဆန့်ကျင်သည် (ဥပမာအားဖြင့်ဘာသာရေး၊
လိင်လိင် Behav ။ 2021 ဇန်နဝါရီ5။
ဒါဝိဒ်သည် P ကိုဖာနန်ဒက် 1 , Daria J ကို Kuss2, မာကု D ကို Griffiths က 2
Doi: 10.1007 / s10508-020-01858-w
အွန်လိုင်းဖိုရမ်များကို အသုံးပြု၍ တိုးပွားလာသောလူ ဦး ရေသည်ကိုယ်တိုင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်သက်ဆိုင်သောပြproblemsနာများကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကို (“ rebooting” ဟုခေါ်ဆိုခြင်း) ကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ကြိုးစားနေကြသည်။ ယခုလက်ရှိအရည်အသွေးလေ့လာမှုသည် online“ rebooting” ဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်များကြားတွင်ရှောင်ကြဉ်ခြင်း၏ထူးခြားသောဖြစ်ရပ်များကိုလေ့လာခဲ့သည်။ အထွေထွေဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်များမှတားမြစ်ထားသောဂျာနယ် ၁၀၄ ခုကိုအကြောင်းအရာအလိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဖြင့်စနစ်တကျဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အချက်အလက်များမှအကြောင်းအရာ (၄) ခု (ခေါင်းစဉ်ခွဲ (၉) ခု) ပေါ်ထွက်လာသည်။ (၁) ညစ်ညမ်းမှုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်စပ်သောပြproblemsနာများအတွက်အဖြေဖြစ်ပြီး၊ (၂) တစ်ခါတစ်ရံတွင်ရှောင်ကြဉ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပုံရသည်၊ (၃) မှန်ကန်တဲ့အရင်းအမြစ်များကိုရယူခြင်း၊ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပါက (၄) ရှောင်ကြဉ်ခြင်းသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည်။ အသင်း ၀ င်များ၏“ rebooting” စတင်ခြင်း၏အဓိကအကြောင်းအရင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲစွဲစွဲလမ်းမှုကိုကျော်လွှားရန်နှင့် (သို့) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဆိုးကျိုးများ၊ ပုံမှန်မဟုတ်သောအမူအကျင့်ပုံစံများနှင့် / သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုအတွက်အမြောက်အများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဆွဲဆောင်မှုများကြောင့် abstinin ကိုအောင်မြင်စွာထိန်းသိမ်းခြင်းသည်အလွန်ခက်ခဲသောအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သော်လည်းအတွင်းပိုင်း (ဥပမာ - သိမြင်မှု - အမူအကျင့်ဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာများ) နှင့်ပြင်ပ (ဥပမာ - လူမှုရေး) အဖွဲ့ဝင်များအတွက် abstinence ရရှိနိုင်သောအရင်းအမြစ်များ။ အဖွဲ့ဝင်များမှရှောင်ကြဉ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအကျိုးကျေးဇူးများအရအနာဂတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းကအကျိုးရှိသောကြားဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုအကြံပြုသော်လည်းအနာဂတ်အလားအလာရှိသောလေ့လာမှုများသည်ဤရိပ်မိသည့်သက်ရောက်မှုများအတွက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောတတိယအကြိမ်ရှင်းပြချက်ကိုဖယ်ထုတ်ရန်နှင့် abstinence ကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုအဖြစ်အသေအချာအကဲဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်ဟုဆို ။ လက်ရှိတွေ့ရှိချက်များက“ rebooting” အတွေ့အကြုံသည်အဖွဲ့ဝင်များ၏ကိုယ်ပိုင်အမြင်များနှင့်ပြfromနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကိုကိုင်တွယ်ရန်ချဉ်းကပ်နည်းအဖြစ်ရှောင်ကြဉ်ရန်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးသည်။
keywords: abstinence; စွဲ; PornHub; အပြာစာပေ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု; “ Rebooting”
ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းသည်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများတွင်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်ကိုယ်စားပြုသောလေ့လာမှုများအရအမျိုးသား ၇၆ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အမျိုးသမီး ၄၁ ရာခိုင်နှုန်းသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အတွင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည် (Rissel et al ။ , 2017) နှင့် US ရှိအမျိုးသား ၄၇ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အမျိုးသမီး ၁၆ ရာခိုင်နှုန်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုလစဉ်သို့မဟုတ် ပို၍ ကြိမ်နှုန်းဖြင့်အသုံးပြုသည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည် (Grubbs, Kraus & Perry, 2019a). PornHub (အကြီးမားဆုံးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေဝက်ဘ်ဆိုက်များထဲမှတစ်ခု) သည်သူတို့၏နှစ်စဉ်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ၄၂ ဘီလီယံလည်ပတ်ခဲ့ပြီးနေ့စဉ်ပျမ်းမျှ ၁၁၅ သန်းကြည့်ရှုခဲ့သည် (Pornhub.com, 2019).
အပြာစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုပျံ့နှံ့နေသောကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်း၏ဆိုးကျိုးများသည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းသိပ္ပံနည်းကျအာရုံစိုက်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။ အများအားဖြင့်ရရှိနိုင်သောအထောက်အထားများအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအသုံးပြုသောလူအများစုအနေဖြင့်သိသာထင်ရှားသောဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုမခံစားရဘဲ၎င်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်ဆိုသော်လည်းအသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်စပ်သောပြproblemsနာများ (ဥပမာ - Bőthe, Tóth-Király, Potenza, Orosz, & Demetrovics) , 2020; Vaillancourt-Morel et al ။ , 2017).
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဓိကပြselfနာတစ်ခုမှာစွဲခြင်းနှင့်ဆိုင်သောလက္ခဏာများဖြစ်သည်။ ဤလက္ခဏာများတွင်ယေဘူယျအားဖြင့်အားနည်းသောထိန်းချုပ်မှု၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှု၊ တဏှာ၊ အလုပ်မလုပ်သောဖြေရှင်းမှုယန္တရားအဖြစ်အသုံးပြုခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ သည်းခံစိတ်၊ 2018; Kor et al ။ , 2014) ။ ပြpornနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း (PPU) သည်စာပေတွင်အများအားဖြင့်စိတ်ရောဂါအဖြစ်တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုခံရခြင်းမရှိသော်လည်းအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုအဖြစ်ခံယူထားသည် (Fernandez & Griffiths, 2019) ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) သည် (၁၁) ကြိမ်မြောက်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ချက်တွင်လိင်အင်္ဂါမလိုက်နာသောလိင်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာရောဂါ (CSBD) ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်း၊ ရောဂါ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခွဲခြားရေး (ICD-11; ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ 2019ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအတင်းအကျပ်အသုံးပြုခြင်းကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ထိုသုတေသနကိုသတိပြုရန်အရေးကြီးသည် (Grubbs & Perry, 2019; Grubbs, Perry, Wilt & Reid, 2019b) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲစွဲခြင်းကိုမိမိကိုယ်ကိုရှုမြင်ခြင်းသည်အမှန်တကယ်စွဲလမ်းသောသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုပုံစံကိုထင်ဟပ်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းပြသခဲ့သည် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်သက်ဆိုင်သောပြproblemsနာများကိုရှင်းပြသည့်ပုံစံ။ (Grubbs et al ။ , 2019b) အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များသည်၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်မှန်သောချို့ယွင်းသောထိန်းချုပ်မှုပုံစံကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်သော်လည်းအခြားသူများသည်ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲလမ်းသည်ဟုခံစားမိနိုင်သည် (စစ်မှန်သောချို့ယွင်းမှုထိန်းချုပ်မှုမရှိခြင်း) ။ လူတစ် ဦး တစ်ယောက်သည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံကိုကိုယ်ကျင့်တရားမနှစ်သက်သော်လည်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်အခါကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှုဖြစ်ပေါ်လာသည်။ Grubbs & Perry၊ 2019) ။ ဤသည် incruruence ထို့နောက်၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုရောဂါဗေဒဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြလိမ့်မယ် (Grubbs et al ။ , 2019b) ။ သို့ရာတွင်၊ ဤပုံစံသည်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုနှင့်စစ်မှန်သောချို့ယွင်းသောထိန်းချုပ်မှုများကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းဖြစ်စေနိုင်သည်ဟူသောဖြစ်နိုင်ခြေကိုမဖယ်ရှားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းသတိပြုသင့်သည် (Grubbs et al ။ , 2019b; Kraus & Sweeney, 2019).
သုတေသနပြုချက်အရအချို့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုသူများသည်၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကြောင့်၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းသည်ပြaticနာကိုရှာဖွေနိုင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ (Twohig, Crosby, & Cox, 2009) ။ PPU ကိုလည်းစာပေတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းဟုခေါ်ဆိုခြင်းခံရပြီးလူပုဂ္ဂိုလ်၊ အလုပ်အကိုင်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲများကိုဖန်တီးပေးသော Grubbs, Volk, Exline, & Pargament, 2015) ။ ကိုယ်တိုင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှု၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုသုတေသနပြုမှုအရအချို့သောသူများသည်၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများ၊ 2000) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများအကြားဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောဆက်နွယ်မှုများမှာယေဘုယျအားဖြင့်အပြည့်အဝပါဝင်ခြင်းမရှိသော်လည်း (Dwulit & Rzymski ကိုကြည့်ပါ။ 2019b) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများအပေါ်မိမိကိုယ်ကိုရှုမြင်သည့်အပျက်သဘောဆောင်သောဆိုးကျိုးများမှာအချို့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှု။ erectile အခက်အခဲများ၊ ပူးပေါင်းပါ ၀ င်သည့်လိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်အလိုဆန္ဒလျော့နည်းလာခြင်း၊ လိင်စိတ်ကျေနပ်မှုလျော့နည်းသွားခြင်းနှင့်လိင်တူချစ်သူတစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံစဉ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအားကိုးခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည် (ဥပမာ Dwulit & Rzymski) , 2019a; Kohut, Fisher, & ကမ့်ဘဲလ်, 2017; Sniewski & Farvid, 2020) ။ အလွန်အကျွံညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာသောလိင်ဆိုင်ရာအခက်အခဲများကိုဖော်ပြရန်အချို့သောသုတေသီများသည်“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု” (PIED) နှင့်“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနိမ့်ကျသော libido” ဟူသောအသုံးအနှုန်းများကိုအသုံးပြုခဲ့သည် (Park et al ။ , 2016).
PPU ကိုကိုင်တွယ်ရန်အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းကိုလုံးဝရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပြproblemနာရှိသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သည့်အဆင့် ၁၂ ဆင့်ပါသောအုပ်စုများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းအပါအ ၀ င်တစ် ဦး ချင်းအတွက်ပြproblemနာဖြစ်သောတိကျသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူအားတားမြစ်ခြင်းနည်းလမ်းအားထောက်ခံလေ့ရှိသည် (Efrati & Gola, 2018) ။ PPU အတွက်လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ချက်များတွင်အချို့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းအားတားဆီးခြင်းကိုလျှော့ချခြင်း / ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့်အသုံးပြုသောရည်မှန်းချက်များ (ဥပမာ Sniewski & Farvid၊ 2019; Twohig & Crosby, 2010).
အကန့်အသတ်ရှိသောကြိုတင်သုတေသနပြုချက်အချို့အရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းမှအကျိုးကျေးဇူးများရှိနိုင်သည်။ လက်တွေ့မဟုတ်သောနမူနာများတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ခြင်းအားစမ်းသပ်လေ့လာမှုသုံးခုကကာလတို (၂ ပတ်မှ ၃ ပတ်) အပြာစာပေရုပ်ပုံကြည့်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ခြင်း (Fernandez, Kuss, & Griffiths) တို့မှအပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိနိုင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ 2020ပိုမိုရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကတိကဝတ်များ (လမ်ဘတ်၊ နစ်ရှ်၊ Stillman၊ Olmstead, & Fincham) အပါအ ၀ င်။ 2012), နှောင့်နှေးလျှော့လျော့ (ဥပမာ, ပိုကြီးတဲ့ပေမယ့်နောက်ပိုင်းတွင်ဆုရရှိရန်ထက်သေးငယ်နှင့်ပိုပြီးချက်ချင်းဆုလာဘ်များအတွက် ဦး စားပေးဖေါ်ပြခြင်း; Negash, Sheppard, Lambert, & Fincham, 2016) နှင့်လူတစ် ဦး ၏ကိုယ်ပိုင်အပြုအမူ (compannive ပုံစံ) ကိုထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်း (Fernandez, Tee & Fernandez, 2017) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနိမ့်ခြင်းများအပါအ ၀ င်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျင့်ပျက်ခြစားမှုများလျော့ပါးစေရန်အတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုသူများကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရန်တောင်းဆိုသည့်လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများလည်းရှိသည် (Bronner & Ben-Zion, 2014), erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ပန်းခြံ et al ။ , 2016; ပေါ်တို၊ 2016) နှင့်လက်တွဲဖော်လိင်စဉ်အတွင်းအော်ဂဇင်ရရှိရန်အခက်အခဲ (Porto, 2016) ။ ဤအမှုများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုမှသက်သာရာရစေသည်။ စုပေါင်းတွေ့ရှိချက်များအရ abstinence သည် PPU အတွက်အကျိုးရှိသောကြား ၀ င်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်ကြောင်းပဏာမသက်သေအထောက်အထားများကိုစုပေါင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
“ Rebooting” လှုပ်ရှားမှု
အထူးသဖြင့်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းတွင်အွန်လိုင်းဖိုရမ်များကိုအသုံးပြုသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုသူများအားလှုပ်ရှားမှုကြီးထွားလာသည်။ NoFap.com, r / NoFap, reboot Nation) အလွန်အမင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပြproblemsနာများကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ကြိုးစားခြင်း (Wilson, 2014, 2016).အောက်ခြေမှတ်ချက် 1 ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဆိုးကျိုးများမှပြန်လည်နာလန်ထူစေရန် (ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း) သည်ဤလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအသုံးပြုသောနှုတ်ခွန်းဆက်သသည့်ဝေါဟာရဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုရှောင်ရှားခြင်း (တစ်ခါတစ်ရံတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့် (သို့မဟုတ်) အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း၌အော်ဂဇင်ပြုခြင်း) တို့ဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုရှောင်ရှားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ယူဆပါသည် 2014b; NoFap.com, ကြိမ်မြောက်) ။ ၎င်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို“ rebooting” ဟုခေါ်သည်။ ဦး နှောက်၏မူလစက်ရုံချိန်ညှိချက်များကိုပြန်လည်ထားရှိခြင်း၏ပုံရိပ်များကိုချိတ်ဆက်ရန် (ဥပမာ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဆိုးကျိုးများမတိုင်မီ၊ 2014b; NoFap.com, ကြိမ်မြောက်) ။ “ rebooting” လုပ်ရန်ရည်ရွယ်သည့်အွန်လိုင်းဖိုရမ်များကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်တည်ထောင်ခဲ့သည် (ဥပမာ၊ r / NoFap, 2020) နှင့်ဤဖိုရမ်များအပေါ်အဖွဲ့ဝင်ကတည်းကကတည်းကလျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာလျက်ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်ပြန်လည် reboot လုပ်သည့်ဖိုရမ်တစ်ခုဖြစ်သည့် r / NoFap subreddit တွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်အဖွဲ့ဝင် ၁၁၆၀၀၀ ခန့်ရှိသည် (Wilson, 2014), နှင့်ဤအရေအတွက်သည် 500,000 ခုနှစ်တွင်အသင်းဝင် 2020 ကျော်အထိတိုးပွားလာခဲ့သည် (r / NoFap, 2020) ။ သို့သော်လက်တွေ့စာပေတွင်လုံလောက်စွာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည့်အရာမှာပြwhatနာများသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုသူ ဦး ရေတိုးပွားလာခြင်းကို ဦး ဆုံးအနေဖြင့်မောင်းနှင်နေသည့်အရာများဖြစ်သည်။ ။
အမျိုးမျိုးသောနမူနာအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုထားသောယခင်လေ့လာမှုများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများမှရှောင်ကြဉ်ရန်ကြိုးစားသူများ၏တွန်းအားများနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုထိုးထွင်းသိမြင်စေနိုင်သည်။ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်လှုံ့ဆော်မှုများအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ခရစ်ယာန်အမျိုးသားများအားအရည်အချင်းပြည့်ဝသောလေ့လာမှု (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု) ကိုလိုလားခြင်းဖြင့်မောင်းနှင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ 2015အွန်လိုင်းအမျိုးသားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေမှီခိုမှုပြန်လည်ထူထောင်ရေးဖိုရမ်တစ်ခုတွင်အီတလီအမျိုးသားများအားအရည်အသွေးလေ့လာမှုအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုရှောင်ခြင်းသည်စွဲလမ်းမှုနှင့်လူမှုရေး၊ လုပ်ငန်းခွင်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ချို့ယွင်းခြင်းအပါအ ၀ င်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောသိသာထင်ရှားသောဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကြောင့်လှုံ့ဆော်ခံခဲ့ရသည်။ , 2009) ။ abstinence နှင့်ဆက်စပ်သောအဓိပ္ပါယ်များအရမကြာသေးမီကဘာသာရေးအမျိုးသားများ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများစွဲကပ်မှုပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း၏ဇာတ်ကြောင်းများကိုအရည်အသွေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအရသူတို့သည်ဘာသာရေးနှင့်သိပ္ပံပညာနှစ်ရပ်လုံးအား၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုကိုနားလည်ရန်နှင့်ဤယောက်ျားများအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ကိုပြသခဲ့သည်။ "ရွေးနှုတ်ခြင်းပုလ်" ၏လုပ်ရပ်အဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူ (Burke & Haltom, 2020, p ။ ၂၆) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ခြင်းအတွက်နည်းဗျူဟာများ၊ ကွဲပြားခြားနားသောပြန်လည်ထူထောင်ရေးအခင်းအကျင်းမှအမျိုးသားများ၏အရည်အသွေးဆိုင်ရာလေ့လာမှုသုံးခုမှတွေ့ရှိချက်များ၊ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအီတလီအွန်လိုင်းဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်များ (Cavaglion, 2008), အဆင့် ၁၂ ဆင့်ပါအုပ်စုများ (Ševčíková, Blinka, & Soukalová, 2018) နှင့်ခရစ်ယာန်အမျိုးသားများ (ပယ်ရီ၊ 2019), လက်တွေ့ကျတဲ့မဟာဗျူဟာများအသုံးပြုခြင်းမှလွဲ။ ဤလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့များအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ပံ့ပိုးမှုပေးခြင်းသည်၎င်းတို့၏ abstinent ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်စွမ်းကိုအဓိကကျသောအရာဟုရှုမြင်ကြသည်။ မကြာသေးမီက r / EveryManShouldKnow (Zimmer & Imhoff, subreddit) မှအမျိုးသားများ၏အရေအတွက်လေ့လာမှု။ 2020တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရန်တွန်းအားသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်ခြင်း၊ လိင်အင်္ဂါထိခိုက်လွယ်မှုကိုလျော့နည်းစေခြင်း၊ အသုံး ၀ င်သော်လည်းဤလေ့လာမှုများမှတွေ့ရှိချက်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုသူများကိုယနေ့အချိန်၌ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းတွင်“ rebooting” လှုပ်ရှားမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်လှုပ်ရှားမှုမဖြစ်ပေါ်မီဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကတည်းကရွှေ့ပြောင်းခြင်း၌အကန့်အသတ်ရှိသည်။ 2008, 2009), သူတို့သည် 12-အဆင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး milieu အတွင်းအထူးဆက်စပ်ခဲ့ကြသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ (Ševčíková et al ။ , 2018) သို့မဟုတ်ဘာသာရေးအခြေအနေ (Burke & Haltom, 2020; Diefendorf, 2015; ပယ်ရီ 2019), သို့မဟုတ်ပါ ၀ င်သူများအား“ rebooting” ဖိုရမ် (Zimmer & Imhoff, မှခေါ်ယူခြင်းကြောင့်) 2020; Imhoff & Zimmer ကိုလည်းကြည့်ပါ။ 2020; Osadchiy၊ Vanmali, Shahinyan, Mills နှင့် Eleswarapu, 2020).
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများ၏ကြားခံနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများကိုစနစ်တကျစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနည်းပါးနေသေးသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးလေ့လာမှု (Vanmali, Osadchiy, Shahinyan, Mills, & Eleswarapu, 2020) PIED နှင့်သက်ဆိုင်သည့်စာသားပါသည့် r / NoFap subreddit (“ rebooting” forum) ပေါ်ရှိပို့စ်များကိုနှိုင်းယှဉ်ရန်သဘာဝဘာသာစကားပြုပြင်ခြင်းနည်းလမ်းများအသုံးပြုသည်။n = 753) ကိုမလုပ်ခဲ့ဘူးသောပို့စ်များကိုရန်n = 21,966) ။ PIED နှင့် PIED မဟုတ်သောဆွေးနွေးမှုများသည်ဆက်ဆံရေး၊ ရင်းနှီးမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုအမျိုးမျိုးတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အကြောင်းအရာများပါ ၀ င်သော်လည်း PIED ဆွေးနွေးမှုများကသာစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်လိင်စိတ်ကိုအဓိကထားဖော်ပြသည်။ ထို့အပြင် PIED ရေးသားချက်များတွင်“ ပိုမို၍ စိတ်ချရသောစာအရေးအသားပုံစံ” ကိုအကြံပြုသည့်“ ကွာဟမှုစကား” နည်းသည် (Vanmali et al ။ , 2020, p ။ ၁) ။ ဤလေ့လာမှု၏တွေ့ရှိချက်များအရ“ rebooting” ဖိုရမ်များ၌တစ် ဦး ချင်း၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများသည်သီးခြားဖြစ်သည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်သက်ဆိုင်သောပြproblemနာပေါ် မူတည်၍ ထူးခြားကြောင်း၊ ဤဖိုရမ်များကိုအသုံးပြုသောသူများ၏ကွဲပြားသောလှုံ့ဆော်မှုများကိုပိုမိုနားလည်ရန်နောက်ထပ်သုတေသနလိုအပ်သည် ။ ဒုတိယ၊ တေလာနှင့်ဂျက်ဆင် (2018) r / NoFap subreddit အဖွဲ့ဝင်များမှတင်ပြချက်များကိုအရည်အသွေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော်သူတို့၏လေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအသင်း ၀ င်များ၏ပုံမှန်မဟုတ်သောရပ်တည်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများကိုအာရုံစူးစိုက်ရန်မဟုတ်ဘဲ၊ အချို့သောအဖွဲ့ဝင်များသည်ပင်ကိုစွမ်းရည်ရှိသည့်ပုလ်နှင့်ပတ်သက်သောစိတ်ကူးယဉ်ဟောပြောချက်များနှင့်၎င်းတို့၏စစ်မှန်သောလိင်မှုကိစ္စကိုတရားမျှတရန်လိုအပ်ကြောင်းမည်သို့ဖော်ပြခဲ့သည်ကိုဖော်ပြရန်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းတို့ကိုခုခံခြင်း (တေလာနှင့်ဂျက်ဆင်၊ 2018, p ။ 621) ။ ထိုကဲ့သို့သောဝေဖန်ဆန်းစစ်မှုများသည်ဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်အချို့၏နောက်ခံသဘောထားများနှင့် ပတ်သက်၍ အသုံးဝင်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အမြင်များနှင့်အဓိပ္ပါယ်များကိုအသံထွက်စေသည့်အဖွဲ့ဝင်များ၏အတွေ့အကြုံများကိုအရည်အသွေးပြည့်မှီသောဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည် (Braun & Clarke, 2013, p ။ 20) ။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကွာဟချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်အွန်လိုင်း“ rebooting” ဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်များကြားတွင်ထူးခြားသောအဖြစ်အပျက်များကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းအားအရည်အသွေးဆန်းစစ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းကိုလမ်းညွှန်ရန်ကျယ်ပြန့်သောသုတေသနမေးခွန်းသုံးခုကို အသုံးပြု၍“ rebooting” ဖိုရမ်တစ်ခု၏အမျိုးသားများမှတားမြစ်ထားသည့်ဂျာနယ် ၁၀၄ ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်လေ့လာခဲ့သည်။ (၁) အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းမှအသင်း ၀ င်များ၏လှုံ့ဆော်မှုသည်အဘယ်နည်း။ နှင့် (104) အဖွဲ့ဝင်များအဘို့ကဲ့သို့သော abstinence အတွေ့အကြုံကဘာလဲ? နှင့် (1) သူတို့ဘယ်လိုသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုနားလည်သဘောပေါက်သလဲ? PPU ၏လက်တွေ့အယူအဆကိုအသိပေးနိုင်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရန်“ rebooting” ဖိုရမ်များတွင်အဖွဲ့ဝင်များတိုးပွားလာနေသောတိကျသောပြproblemsနာများကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာနားလည်နိုင်ရန်သုတေသီများနှင့်ဆရာ ၀ န်များအနေဖြင့်လက်ရှိလေ့လာမှုမှတွေ့ရှိချက်များသည်အသုံးဝင်လိမ့်မည်။ (၂) အသင်းဝင်များအတွက်“ rebooting” အတွေ့အကြုံသည် PPU အတွက်ထိရောက်သောကုသနည်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလမ်းညွှန်ပေးပြီး PPU အတွက်ကြားဝင်ခြင်းအဖြစ်ရှောင်ကြဉ်ခြင်းကိုနားလည်ရန်အသိပေးနိုင်သည်။
အွန်လိုင်းမှ“ rebooting” ဖိုရမ်မှအချက်အလက်များကောက်ယူသည်။ reboot Nation (Nation Reboot, 2020). reboot Nation ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအချက်အလက်စုဆောင်းခြင်း (ဇူလိုင်လ ၂၀၁၁) တွင်ဖိုရမ်တွင်အသင်းဝင် ၁၅၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။ အပေါ် reboot Nation ပင်မစာမျက်နှာ၊ သတင်းအချက်အလက်ဗီဒီယိုများနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဖော်ပြသည့်ဆောင်းပါးများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားပါသည်။ မှတ်ပုံတင်ထားသောအသင်းဝင်ဖြစ်ရန် reboot Nation ဖိုရမ်တစ်ခုတွင်လူတစ် ဦး သည်အသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်ကို ဖန်တီး၍ မှန်ကန်သောအီးမေးလ်လိပ်စာတစ်ခုပေးရန်လိုအပ်သည်။ မှတ်ပုံတင်ထားသောအသင်းဝင်များသည်ထို့နောက်ဖိုရမ်တွင်ချက်ချင်းစတင်ရေးသားနိုင်သည်။ ဤဖိုရမ်သည်အဖွဲ့ဝင်များအချင်းချင်းဆက်သွယ်နိုင်ရန်နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပတ်သက်သောပြproblemsနာများမှပြန်လည်နာလန်ထူမှုကိုဆွေးနွေးရန် (ဥပမာ -“ rebooting” အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေသောသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဗျူဟာများကိုဝေမျှခြင်းသို့မဟုတ်အထောက်အပံ့တောင်းခံခြင်း) အတွက်ပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။ ခေါင်းစဉ်အလိုက်အမျိုးအစားခွဲခြားထားသည့်ဖိုရမ်တွင်အပိုင်း ၅ ပိုင်းပါ ၀ င်သည် -“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု၊ ”“ ညစ်ညမ်းသောလိင်အင်္ဂါကမောက်ကမဖြစ်မှု / နှောင့်နှေးသုတ်သင်ခြင်း၊ ”“ rebooters နှင့်စွဲလမ်းသူများ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ” (PPU နှင့်ပါ ၀ င်သူများအနေဖြင့်မေးခွန်းများမေးနိုင်သည်သို့မဟုတ်သူတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေနိုင်သည်)၊ အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းများ” (ရေရှည် abstinence အောင်မြင်စွာအောင်မြင်ခဲ့သူတစ် ဦး ချင်းစီသည်သူတို့၏ခရီးကိုနောက်ကြောင်းပြန်လှည့်နိုင်သည်) နှင့်“ ဂျာနယ်များ” (အဖွဲ့ဝင်များသည်ဂျာနယ်များကို အသုံးပြု၍ သူတို့၏“ rebooting” အတွေ့အကြုံများကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီမှတ်တမ်းတင်ရန်ခွင့်ပြုထားသော) ။
ဒေတာစုဆောင်းခြင်းကိုမစတင်ခင်ပထမစာရေးဆရာသည်ဖိုရမ်ရှိဂျာနယ်များ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အကြောင်းအရာများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရန် ၂၀၁၁ ခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်မှရေးသားချက်များအားဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့်“ ဂျာနယ်များ” အပိုင်းကိုကြိုတင်လေ့လာခဲ့သည်။ အသင်းဝင်များသည်စာနယ်ဇင်းအသစ်တစ်ခု ဖန်တီး၍ ဂျာနယ်များကိုစတင်လေ့ရှိပြီးပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့၏နောက်ခံနှင့် abstinence ရည်မှန်းချက်များအကြောင်းပြောဆိုရန်သူတို့၏ပထမဆုံးရေးသားချက်ကိုအသုံးပြုသည်။ ဤအကြောင်းအရာသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဂျာနယ်ဖြစ်လာသည်။ ၎င်းသည်အခြားအဖွဲ့ဝင်များသည်လွတ်လပ်စွာကြည့်ရှု။ အားပေးမှုနှင့်ပံ့ပိုးမှုပေးရန်မှတ်ချက်ပေးနိုင်သည်။ ဤဂျာနယ်များသည်အဖွဲ့ဝင်များမှရှောင်ကြဉ်ခြင်းအတွေ့အကြုံများနှင့်သူတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုမည်သို့ရှုမြင်ပြီးနားလည်မှုရှိကြောင်းကြွယ်ဝသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များ၏ရင်းမြစ်ဖြစ်သည်။ အချက်အလက်များကိုဤပိတ်ဆို့တားဆီးနိုင်သည့်နည်းဖြင့်စုဆောင်းခြင်း၏အားသာချက် (လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်ပါ ၀ င်ရန်ဖိုရမ်ရှိအဖွဲ့ဝင်များကိုတက်ကြွစွာချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်။ လက်ရှိဂျာနယ်များကိုအချက်အလက်အဖြစ်အသုံးပြုခြင်း) သည်အသင်း ၀ င်များ၏အတွေ့အကြုံများကိုသဘာဝကျကျလေ့လာနိုင်ရန်၊ သုတေသီများ၏လွှမ်းမိုးမှုမရှိပဲ (Holtz, Kronberger, & Wagner, 2012) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏နမူနာတွင်အလွန်အကျွံသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောခြင်းကိုရှောင်ရှားရန် (Braun & Clarke, 2013)၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးသပ်ချက်ကိုအသက် ၁၈ နှစ်နှင့်အထက်ရှိဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်များနှင့်သာကန့်သတ်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။အောက်ခြေမှတ်ချက်2ဂျာနယ်များကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက်ရွေးချယ်မည့်ဂျာနယ်များအတွက်ပါ ၀ င်သည့်စံနှုန်းနှစ်ရပ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ပထမ ဦး စွာဂျာနယ်၏ပါ ၀ င်မှုသည်အရည်အသွေးပြည့်ဝသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုခံရရန်လုံလောက်သောကြွယ် ၀ စွာနှင့်ဖော်ပြရန်လိုအပ်သည်။ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းစတင်ရန်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်အသေးစိတ်လေ့လာထားသည့်ဂျာနယ်များကဤစံနှုန်းကိုပြည့်မီစေရန်သူတို့၏အတွေ့အကြုံများ (ဥပမာ - အတွေးများ၊ အမြင်များ၊ ခံစားချက်များနှင့်အပြုအမူများ) ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်ကန့်သတ်တားဆီးမှုကြိုးပမ်းမှုမှာအနည်းဆုံး ၇ ရက်ကြာသော်လည်း ၁၂ လထက်မပိုရန်လိုအပ်သည်။ ဤကာလကိုအစောပိုင်းကရှောင်ကြဉ်ခြင်းအတွေ့အကြုံနှစ်ခုလုံးကိုရှင်းပြရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် (<၃ လ; Fernandez et al ။ , 2020) နှင့်ရေရှည် abstinstence (>3လ) ၏ကာလအောက်ပါအတွေ့အကြုံများကို။အောက်ခြေမှတ်ချက် 3
ဒေတာစုဆောင်းသည့်အချိန်၌အထွေထွေဂျာနယ်တွင်ယောက်ျားပေါင်း ၆၉၃၉ ချည်ရှိသည်။ ဖိုရမ်တွင်ဂျာနယ်များကိုအသက်အရွယ်အလိုက်ခွဲခြားသတ်မှတ်သည် (ဥပမာ - ဆယ်ကျော်သက်များ၊ ၂၀၊ ၃၀၊ ၄၀ နှင့်အထက်) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာမည်သည့်အသက်အရွယ်နှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲမည်သည့်အသက်အရွယ်နှင့်မဆိုကြိုက်နှစ်သက်မှုကင်းမဲ့ခြင်းအတွေ့အကြုံ၏ဘုံပုံစံများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အသက် ၃၃ နှစ် (၁၈-၂၉ နှစ်၊ ၃၀-၃၉ နှစ်နှင့်≥နှစ် ၄၀) တို့တွင်အလားတူဂျာနယ်များကိုစုဆောင်းရန်စတင်ခဲ့သည်။ ပထမဆုံးစာရေးသူသည် ၂၀၁၆-၂၀၁၈ နှစ်မှစ၍ ဂျာနယ်များကိုကျပန်း ရွေးချယ်၍ ဂျာနယ်၏ပါ ၀ င်မှုများကိုပုံမှန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ပါဝင်မှုစံနှုန်းနှစ်ခုနှင့်ကိုက်ညီပါက၎င်းကိုရွေးချယ်ခဲ့သည် ဒီရွေးချယ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်မှာအသက်အုပ်စုတစ်ခုစီကနေမျှတတဲ့စာနယ်ဇင်းအရေအတွက်အမြဲတမ်းရှိဖို့သေချာခဲ့ပါတယ်။ ဂျာနယ်တစ်ခုစီကိုရွေးချယ်သည့်အခါတိုင်းပထမ ဦး ဆုံးရေးသားသူမှအချက်အလက်များကိုအကျွမ်းတ ၀ င်ဖြစ်ခြင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် (“ ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း” အပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသည်) ကိုအပြည့်အဝဖတ်ရသည်။ ဒေတာများပြည့်နှက်နေကြောင်းကိုဆုံးဖြတ်သည်အထိဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစနစ်တကျဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကဒီရွှဲမှတ်မှာဒေတာစုဆောင်းခြင်းအဆင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ စုစုပေါင်းအကြောင်းအရာပေါင်း (၃၂၆) ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီး၊ ပါဝင်သည့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောဂျာနယ် ၁၀၄ ခုကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။N = ၃၄] နှစ် ၃၀-၃၉ နှစ်N = 35] နှင့် years နှစ်ပေါင်း 40N = 35] ။ ဂျာနယ်တစ်ခုစီ၏ပျမ်းမျှအရေအတွက်မှာ ၁၆.၆၇ ဖြစ်သည်။SD = 12.67), နှင့်ဂျာနယ်တစ် ဦး လျှင်ဖြေကြားချက်၏နံပါတ် 9.50 (SD = 8.41) ။ အဖွဲ့ဝင်များနှင့်ပတ်သက်သောလူ ဦး ရေဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက် (ဥပမာ - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်အခြားအရာဝတ္ထုများ / အပြုအမူများ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများအပေါ်မိမိကိုယ်မိမိစွဲလမ်းနေသည်) ကိုသူတို့၏ဂျာနယ်များမှအစီရင်ခံသည့်နေရာတိုင်းမှထုတ်ယူခဲ့သည်။ နမူနာဝိသေသလက္ခဏာများဇယားထဲမှာအကျဉ်းချုံးထားပါသည် 1။ အဖွဲ့ဝင် ၈၀ သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲကပ်ခံရသည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့ပြီး ၄၉ ဦး ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲရှိကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ အဖွဲ့ဝင် ၃၂ ဦး ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲစွဲခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများကြုံတွေ့နေရသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။
ဇယား 1 နမူနာဝိသေသလက္ခဏာများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ထူးခြားစွာဆန်းစစ်လေ့လာထားသောအကြောင်းအရာအလိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့်အချက်အလက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည် (TA; Braun & Clarke, 2006, 2013) ။ အကြောင်းအရာအလိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်သီအိုရီအရပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သုတေသီများအားအချက်အလက်စုဆောင်းမှုတစ်ခုအကြားပုံစံပြုထားသောအဓိပ္ပာယ်ကိုကြွယ်ဝသော၊ အသေးစိတ်ကျသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိုပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားဆန်းကြယ်သောချဉ်းကပ်မှုအရကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာ“ အတွေ့အကြုံရှိသူများ၏သဘောသဘာဝကိုပိုင်းခြားသိမြင်နိုင်ရန်နားလည်ထားသည့်အတိုင်းအတွေ့အကြုံအသေးစိတ်ဖော်ပြရန်” ဖြစ်သည် (Coyle, 2015, p ။ 15) ဤကိစ္စတွင်“ rebooting” ဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်များမှနားလည်ထားသည့်အတိုင်း“ rebooting” အတွေ့အကြုံ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိုလက်တွေ့ကျသောလက်တွေ့သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာမူဘောင်အတွင်း၌တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည်“ အမှန်တရားတည်ရှိမှုကိုအတည်ပြုသည်။ သို့သော်တစ်ချိန်တည်းတွင်၎င်း၏ကိုယ်စားပြုမှုများသည်ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာစကားနှင့်မျိုးနွယ်၊ ကျား၊ လူမှုလူတန်းစား” (Ussher, 1999, p ။ 45) ။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်အသင်း ၀ င်များ၏အကောင့်များကိုတန်ဖိုး ဖြတ်၍ ၎င်းတို့အတွေ့အကြုံများ၏အဖြစ်မှန်ကိုယေဘုယျအားဖြင့်တိကျသောကိုယ်စားပြုမှုအဖြစ်မှတ်ယူခဲ့သည်၊ ၎င်းတို့သည်လူမှုယဉ်ကျေးမှုအခြေအနေ၏ဖြစ်နိုင်ချေသြဇာကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ယခုလေ့လာဆန်းစစ်မှုအရကျွန်ုပ်တို့သည် semantic အဆင့် (Braun & Clarke) တွင်အကြောင်းအရာများကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ 2006), အဖွဲ့ဝင်များ၏ကိုယ်ပိုင်အဓိပ္ပါယ်များနှင့်သဘောထားအမြင် ဦး စားပေး။
ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံးကျွန်တော်တို့ NVivo 12 software ကိုသုံးခဲ့ပြီး Braun နဲ့ Clarke မှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်အလက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလိုက်နာခဲ့သည်။2006) ။ ပထမ ဦး စွာဂျာနယ်များကိုပထမဆုံးရေးသားသူကရွေးချယ်ပြီးသည့်နောက်တွင်ဖတ်ရှုပြီးနောက်အချက်အလက်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုအတွက်ပြန်လည်ဖတ်သည်။ ဒုတိယနှင့်တတိယစာရေးဆရာများနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးဒေတာတစ်ခုလုံးကိုပထမ ဦး ဆုံးစာရေးသူမှစနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ကုဒ်များသည်အောက်ခြေမှလုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြု၍ ရရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကြိုတင်စဉ်းစားထားသောကုဒ်နံပါတ်များသည်ဒေတာအပေါ်တွင်ချမှတ်ခြင်းမရှိပါ။ အချက်အလက်များကို semantic level (Braun & Clarke) တွင်စာရင်းပြုစုထားသည်။ 2013890 ထူးခြားတဲ့ဒေတာ - ဆင်းသက်လာ codes တွေကိုအတွက်ရရှိလာတဲ့။ ပုံစံများကိုအဆင့်မြင့်အမျိုးအစားများဖွဲ့စည်းရန်စတင်ပေါ်ပေါက်လာသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ထိုကုဒ်များကိုပေါင်းစည်းခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်“ ရိုးသားမှုသည်လွတ်မြောက်ခြင်း” နှင့်“ တာ ၀ န်ခံမှုကရှောင်ကြဉ်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည်” အခြေခံစည်းမျဉ်းများကို“ ထိရောက်သောဖြေရှင်းနိုင်သည့်နည်းဗျူဟာများနှင့်အရင်းအမြစ်များ” အောက်တွင်အုပ်စုလိုက်ဖွဲ့စည်းထားသော“ တာ ၀ န်ခံမှုနှင့်ရိုးသားမှုကို” အမျိုးအစားအသစ်သို့အုပ်စုဖွဲ့ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ယေဘူယျအားဖြင့်တားမြစ်ခြင်းဆိုင်ရာကြိုးပမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောဂျာနယ်တစ်ခုချင်းစီမှဖော်ပြသောသတင်းအချက်အလက် (ဆိုလိုသည်ကရှောင်ကြဉ်ခြင်း၏ရည်မှန်းချက်နှင့်၎င်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ကြိုးပမ်းမှု၏အချိန်ကာလ) ကိုလည်းစနစ်တကျထုတ်ယူခဲ့သည်။ အချက်အလက်စုဆောင်းမှုတစ်ခုလုံးကိုကုဒ်ပြီးသည်နှင့်ကုဒ်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးလိုအပ်သည့်အတိုင်းထပ်မံဖြည့်စွက်သည်သို့မဟုတ်ဒေတာအစုတစ်ခုလုံးတွင်တသမတ်တည်းသောကုဒ်များသေချာစေရန်။ ထို့နောက်ပထမ ဦး ဆုံးစာရေးသူမှလေ့လာသူများ၏ခေါင်းစဉ်များကိုလေ့လာရန်အတွက်သုတေသနမေးခွန်းများမှလမ်းညွှန်ပေးခဲ့သည်။ ဒုတိယနှင့်တတိယစာရေးသူများ၏ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအပြီးတွင်ခေါင်းစဉ်များသည်သန့်စင်ပြီးသုတေသနအဖွဲ့သုံးဖွဲ့လုံးမှသဘောတူညီမှုရရှိပြီးသည်နှင့်အပြီးသတ်နိုင်ခဲ့သည်။
သုတေသနအဖွဲ့၏ကျင့်ဝတ်ရေးရာကော်မတီသည်လေ့လာမှုကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်အချက်အလက်များကို“ အများပြည်သူ” နေရာဟုယူထားသောအွန်လိုင်းမှနေရာတစ်ခုမှကောက်ယူခြင်းရှိ၊ မရှိကိုစဉ်းစားရန်အရေးကြီးသည် (British Psychological Society, 2017; Eysenbach & မှီတိုင်အောင်, 2001; Whitehead, 2007) ။ အဆိုပါ reboot Nation ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကို အသုံးပြု၍ ဖိုရမ်ကိုအလွယ်တကူတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဖိုရမ်ပေါ်ရှိတင်ထားသောစာမူများကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အသင်း ၀ င်ခြင်းမလိုပဲမည်သူမဆိုကြည့်ရှုရန်အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းဖိုရမ်သည်သဘာဝတွင်အများပြည်သူဖြစ်သည်ဟုကောက်ချက်ချခဲ့သည် (Whitehead, 2007) နှင့်အဖွဲ့ ၀ င်တစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်အသိပေးအကြောင်းကြားရန်မလိုအပ်ပါ။ (စာရေးသူ၏တက္ကသိုလ်ကျင့်ဝတ်ကော်မတီကဲ့သို့) မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်များ၏လုံခြုံရေးနှင့်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုထပ်မံကာကွယ်ရန်အတွက်ရလဒ်တွင်ဖော်ပြထားသောအသုံးပြုသူအမည်အားလုံးကိုအမည်ဝှက်ထားပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက်အခြေအနေကိုဖော်ပြရန်၊ တားမြစ်ခြင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများကိုအကျဉ်းချုပ်ဇယားတွင်ဖော်ပြထားသည် 2။ abstinence ရည်မှန်းချက်များအရအဖွဲ့ဝင် ၄၃ ယောက်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်ကိုရှောင်ကြဉ်ရန်၊ အဖွဲ့ဝင် ၄၇ ဦး သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်နှင့် ၁၄ ဦး သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုရှောင်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာနမူနာ၏အနည်းဆုံး (၈၆.၅%) သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်ရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူသူတို့ရှောင်ကြဉ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုအစတွင်အသင်း ၀ င်အားလုံးနီးပါးကသူတို့၏ abstinence ရည်မှန်းချက်များအတွက်အချိန်အတိအကျကိုတိတိကျကျမဖော်ပြခဲ့ခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းတို့သည်ဤအပြုအမူများကိုအမြဲတမ်းနုတ်ထွက်ရန်ရည်ရွယ်ခြင်းရှိ၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဖွဲ့ဝင်များကိုပုံမှန်အားဖြင့်ခေတ္တရပ်နားရန်သို့မဟုတ်အပြုအမူအားအစဉ်အမြဲရပ်တန့်ရန်စိတ် ၀ င်စားမှုရှိမရှိကိုမမှတ်မိနိုင်ပါ။ အသင်း ၀ င်များ၏ရှင်းလင်းပြတ်သားသောဖော်ပြချက်များ (ဥပမာ -“ ပြန်လည်စတင်သည့်နေ့ ၄၉ တွင်”) သို့မဟုတ်အဖွဲ့ ၀ င်များ၏တင်သည့်ရက်စွဲများအပေါ် အခြေခံ၍ နှုတ်ယူခြင်းမှတစ်ဆင့်ဂျာနယ်တစ်ခုချင်းစီအတွက်တားမြစ်ခြင်း၏စုစုပေါင်းကြာချိန်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကောက်ယူခဲ့သည်။ abstinence ကြိုးပမ်းမှု၏တွက်ချက်စုစုပေါင်းကြာချိန်၏အများစုသည်ရက်ပေါင်း ၇၀ မှ ၃၀ (၅၂.၀%) အကြားရှိခဲ့ပြီး၊ abstinence ကြိုးစားမှုအားလုံး၏ပျမ်းမျှစုစုပေါင်းကြာချိန်မှာ ၃၆.၅ ရက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်အသင်း ၀ င်များသည်ဤအချိန်ကာလများကျော်လွန်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်မလိုတော့ကြောင်းသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ ဤတာဝန်ကျချက်များသည်ဂျာနယ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသောကန့်သတ်တားဆီးမှုကြိုးပမ်းမှုကိုထင်ဟပ်စေသည်။ အသင်း ၀ င်များကမူဆက်လက်တားမြစ်ရန်ကြိုးစားသော်လည်းသူတို့၏ဂျာနယ်များတွင်မတင်တော့ပါ။
abstinence ကြိုးစားမှု၏စားပွဲတင်2ဝိသေသလက္ခဏာများ
ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမှခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိုးခုပါသောအကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်လေးခုကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည် (ဇယားကိုကြည့်ပါ) 3) ။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်အကြိမ်ရေအရေအတွက်သို့မဟုတ်ကြိမ်နှုန်းကိုဖော်ပြသောဝေါဟာရများကိုတစ်ခါတစ်ရံတွင်ဖော်ပြသည်။ “ အချို့” ဟူသောဝေါဟာရသည်အသင်း ၀ င်များ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအောက်သာဖြစ်ပြီး၊ “ များစွာသော” သည်အဖွဲ့ဝင် ၅၀% မှ ၇၅% အကြားရည်ညွှန်းသည်။အောက်ခြေမှတ်ချက်4ဖြည့်စွက်အဆင့်တစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် NVivo12 ရှိ“ crosstab” function ကို သုံး၍ အသက် ၃ နှစ်အရွယ်တွင် abstinence အတွေ့အကြုံများ၏ကြိမ်နှုန်းတွင်သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုများရှိခဲ့လျှင်လေ့လာခဲ့သည်။ ဤကွဲပြားခြားနားမှုများသည်စာရင်းအင်းသေဘာအရထူးခြားမှုရှိ / မရှိကိုဆုံးဖြတ်ရန် chi-square ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည် (နောက်ဆက်တွဲကတွင်ကြည့်ပါ) ။ အသက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်သောကွဲပြားခြားနားမှုများကိုအောက်ဖော်ပြပါသက်ဆိုင်ရာခေါင်းစဉ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ဇယား ၃။ ဒေတာအစုအဝေး၏အကြောင်းအရာအလိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမှရရှိသည့်အခင်းအကျင်းများ
အခင်းအကျင်းတစ်ခုစီကိုရှင်းလင်းဖော်ပြရန်၊ ပါ ၀ င်သောကုဒ်နံပါတ် (၀၀၁-၁၀၄) နှင့်အသက်နှင့်အတူသရုပ်ဖော်ပုံများကိုဖော်ပြထားသည်။ စာလုံးပေါင်းအမှားများကိုဖတ်ရှုနိုင်ရန်အထောက်အကူပြုရန်စာလုံးပေါင်းအမှားများမရှိခြင်း အသင်းဝင်များအသုံးပြုသောဘာသာစကားအချို့ကိုနားလည်ရန်အတွက်အသုံးများသောအတိုကောက်များကိုအကျဉ်းချုပ်ရှင်းပြရန်လိုအပ်သည်။ “ PMO” အတိုကောက် (ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ / တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း / အော်ဂဇင်) အတိုကောက်အော်ဂဇင်ကိုတီးခတ်စဉ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရည်ညွှန်းရန်အဖွဲ့ဝင်များကမကြာခဏအသုံးပြုကြသည် (Deem, 2014a) ။ အဖွဲ့ဝင်များသည်သူတို့၏အကျင့်စာရိတ္တကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုလေ့ရှိသောကြောင့်သူတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများမည်မျှအသုံးပြုသည်နှင့်အမျှဤအပြုအမူသုံးခုကိုအတူတကွစုစည်းလေ့ရှိသည်။ ဤအပြုအမူများကိုသီးခြားစီဆွေးနွေးရာတွင်အဖွဲ့ဝင်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုရန် P, p ဟုခေါ်။ “ M” နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းအော်ဂဇင်ကို“ O. ” ဟုခေါ်ဆိုသည်။ ဤအပြုအမူများကိုပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်အမည်ဝှက်ခြင်း (ဥပမာ PM သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုရည်ညွှန်းသည်။ သို့သော်“ MO” သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းမရှိဘဲအော်ဂဇင်အချက်များကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်) ။ ထိုအတိုကောက်ဝေါဟာရများကိုတစ်ခါတစ်ရံကြိယာ (ဥပမာ -“ PMO-ing” သို့မဟုတ်“ MO-ing”) အဖြစ်အသုံးပြုသည်။
အသင်း ၀ င်များ၏“ rebooting” လုပ်ရန်ကန ဦး ဆုံးဖြတ်ချက်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ဆိုင်သောပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်ယုတ္တိရှိသောအဖြေတစ်ခုဖြစ်သည်ဟူသောယုံကြည်ချက်အပေါ်အခြေခံသည်။ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းသည်သူတို့၏ဘ ၀ များတွင်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်ဟုယုံကြည်သောကြောင့်တားမြစ်ခြင်းကိုစတင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကိုဖယ်ရှားခြင်းသည် ဦး နှောက်ကို“ ပြန်လည်လည်ပတ်ခြင်း” မှတစ်ဆင့်ထိုသက်ရောက်မှုများကိုလျော့ပါးစေသည်။ အပြာစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုကိုစွဲလမ်းစေသောသဘောသဘာဝကြောင့်အပြုအမူအားလျှော့ချခြင်း / ထိန်းချုပ်ခြင်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ပြန်လည်နာလန်ထူရေးအတွက်အလားအလာရှိသောမဟာဗျူဟာတစ်ခုအဖြစ်မရှုမြင်ခဲ့ပါ။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအလွန်အကျွံအသုံးပြုမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအဓိကအကျိုးဆက်သုံးခုကိုအဖွဲ့ဝင်များကရှောင်ကြဉ်ခြင်းကိုစတင်ရန်လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ပထမ ဦး စွာအဖွဲ့ဝင်များစွာအတွက် (n ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းပုံစံကိုကျော်လွှားလိုသောဆန္ဒရှိခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရန်လှည့်စားခြင်း (ဥပမာ၊ "အခုအသက် ၄၃ နှစ်ရှိပြီ။ ဒီကြောက်မက်ဘွယ်သောစွဲလမ်းမှုမှလွတ်မြောက်ရန်ယခုအချိန်တွင်ရောက်ရှိလာပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်" [098, 43 နှစ်] ။ စွဲစွဲလမ်းမှုကိုအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းဆုံးရှုံးခြင်းတို့၏အတွေ့အကြုံ (ဥပမာ - "ငါရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားနေတာ၊ ဒါပေမယ့်အရမ်းခက်တယ်၊ ငါဟာ porn ကိုတွန်းအားပေးတဲ့အရာတစ်ခုခုရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်" [005, 18 နှစ်]), အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှညစ်ညမ်း၏သက်ရောက်မှုများ desensitization နှင့်သည်းခံစိတ် (ဥပမာ, "ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်တဲ့အခါဘာမှမခံစားရတော့ဘူး။ ၀ မ်းနည်းစရာကောင်းတယ်၊" [045, 34 နှစ်]) နှင့်စိတ်ပျက်နှင့် disempowerment ၏ခံစားချက်များကိုစိတ်ပျက်ဖွယ် ("ကိုယ့်ရပ်တန့်ဖို့ခွန်အားမရှိဘူးဆိုတာမုန်းတယ်။ ငါဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုဆန့်ကျင်နိုင်တဲ့အစွမ်းမရှိဘူး။" [087, 42 နှစ်] ။
ဒုတိယ၊ အသင်း ၀ င်အချို့အတွက် (n = 44), abstinence ဤအခက်အခဲများ (erectile အခက်အခဲများ [ယုံကြည်မှုအပေါ်အခြေခံပြီး, သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများသက်သာစေရန်အလိုဆန္ဒအားဖြင့်လှုံ့ဆော်ခဲ့သည်n = 39]; မိတ်ဖက်လိင်ဆန္ဒလျော့နည်းလာခြင်း [n = 8]) (ဖြစ်နိုင်သည်) ညစ်ညမ်း - သွေးဆောင်ခဲ့ကြသည်။ အဖွဲ့ဝင်များကသူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သောပြproblemsနာများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်စပ်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများအပေါ်သူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုများကိုအေးစက်စေသောရလဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ "ငါဟာတခြားလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်စိတ် ၀ င်စားမှုကင်းမဲ့ပုံကိုသတိပြုမိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်လက်တော့ပ်နှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးထားခဲ့သည်" [083, 45 နှစ်]) ။ Erectile အခက်အခဲများကိုတင်ပြသည့်အဖွဲ့ဝင် ၃၉ ဦး အနက် ၃၇ ဦး တွင် ၃၁ ဦး သည်“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု” (PIED) ကိုခံစားနေရသည်ဟုအတော်အတန်ယုံကြည်ကြသည်။ အခြား (n = 8) အခြားဖြစ်နိုင်ချေရှိသောရှင်းလင်းချက်များ (ဥပမာစွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်စိတ်၊ အသက်နှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်များစသဖြင့်) ကိုဖယ်ထုတ်လိုသောကြောင့်သူတို့၏စိုက်ထူခြင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများကို“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများဖြင့်ဖော်ပြခြင်း” ဟုတိတိကျကျသတ်မှတ်ခြင်းမရှိသော်လည်းကိစ္စရပ်ကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် သူတို့သည်အမှန်ပင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်နွှယ်ကြသည်။
တတိယ၊ အဖွဲ့ဝင်အချို့အတွက် (n = 31), abstinence သူတို့ရဲ့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမှစွပ်စွဲရိပ်မိစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေးအကျိုးဆက်များကိုလျှော့ချရန်အလိုဆန္ဒအားဖြင့်လှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားမှု၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားနိုင်စွမ်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ "၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အာရုံစူးစိုက်မှု၊ လှုံ့ဆော်မှု၊ မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှု၊" [050, 33 နှစ်] ။ " အချို့သောအသင်းဝင်များသည်၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းသည်သူတို့၏လူမှုရေးလုပ်ငန်းများအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုလည်းရိပ်မိကြသည်။ အချို့ကအခြားသူများနှင့်ဆက်သွယ်မှုလျော့နည်းသွားသည်ဟုဖော်ပြသည် (ဥပမာ - PMO) ကကျွန်ုပ်ကိုလူများအားစိတ်ဝင်စားမှုနည်းစေပြီး ပို၍ ရင်းနှီးစေခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုစုပ်ယူခြင်း၊ လူမှုရေးစိတ်ပူပန်မှုကိုဖြစ်စေသည်။ နှင့်အခြားသူများနှင့်သိသာထင်ရှားသောအခြားသူများနှင့်မိသားစုဝင်များ၊ အထူးသဖြင့်ရင်ခုန်စရာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်တိကျသောဆက်ဆံရေးယိုယွင်းပျက်စီးမှုကိုသတင်းပေးပို့နေစဉ်” [050, 33 years]) ။
အထူးသဖြင့်အဖွဲ့ဝင်အနည်းငယ်သာ (n = 11) သူတို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအချို့သောနည်းများဖြင့်ကိုယ်ကျင့်တရားမနှစ်သက်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။n = 4)“ rebooting” စတင်ရန်အကြောင်းပြချက်အဖြစ်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမကျေနပ်မှုကိုအတိအလင်းဖော်ပြခဲ့သည် (ဥပမာ -“ ဒီ shit ကစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းတဲ့အတွက်ငါ porn ကိုစွန့်ခွာနေတယ်။ မိန်းကလေးများအဓမ္မပြုကျင့်ခံရခြင်းနှင့်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းနှင့်ဒီ shit မှာ fuck ဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုတွေအဖြစ်အသုံးချခြင်းခံရတယ်” [008, 18 နှစ်] ) ။ သို့သော်ဤအသင်းဝင်များအတွက်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုကိုတားမြစ်ခြင်းကိုတစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်အဖြစ်မဖော်ပြခဲ့ပါ။ သို့သော်အခြားအဓိကအချက်သုံးချက် (ဆိုလိုသည်မှာရိပ်မိစွဲလမ်းမှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများသို့မဟုတ်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များ) နှင့်အတူလိုက်ပါခဲ့သည်။
ဦး နှောက်ကို“ ပြန်လည်ငှားရမ်းခြင်း” နှင့် ပတ်သက်၍ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း
အချို့သောအဖွဲ့ဝင်များကသူတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းသည်သူတို့၏ ဦး နှောက်ကိုမည်သို့ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုနားလည်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ asstinence ကိုချဉ်းကပ်ခဲ့သည်။ Abstinence သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဆိုးကျိုးများကိုဖယ်ရှားရန်အတွက်ယုတ္တိနည်းအရ၊ ဦး နှောက်ကို“ ပြန်လည်နွေးထွေးစေမည့်” လုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့သည် (ဥပမာ၊ “ ကျွန်ုပ်၏လမ်းကြောင်းများကကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်ကိုဖြေရှင်းရန်အတွက်ကျွန်ုပ်ရှောင်ကြဉ်ရန်လိုအပ်သည်ကိုသိသည်”) ။ 095s]) ။ အထူးသဖြင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာပကတိအယူအဆသည်အဖွဲ့ဝင်အချို့အတွက်မျှော်လင့်ချက်နှင့်အားပေးမှုရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဆိုးကျိုးများကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြင့်ပြန်လည်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားနိုင်သည်ဟုယုံကြည်စေသည် (ဥပမာ -“ ဦး နှောက်ပလပ်စတစ်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးမည့်အမှန်တကယ်ချွေတာသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်”) [40, 036 နှစ်]) ။ အဖွဲ့ဝင်အချို့ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဆိုးကျိုးများအကြောင်းလေ့လာခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်အရင်းအမြစ်များမှတစ်ဆင့်“ rebooting” အသိုင်းအဝိုင်း၊ အထူးသဖြင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အိမ်ရှင်ဂယ်ရီဝီလ်ဆင်မှလေးစားသောသြဇာရှိသူများမှသတင်းအချက်အလက်ရင်းမြစ်များမှတဆင့်ဖော်ပြခဲ့သည်။ yourbrainonporn.com။ Wilson ၏ (2014) စာအုပ် (ဥပမာ၊ “ ဂယ်ရီဝီလ်ဆင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်ကသင့် ဦး နှောက်စာအုပ်…ဤစကားဝိုင်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုပြန်လည်ဖွင့်ရန်စိတ်ကူးနှင့်ကျွန်ုပ်မသိသောအရာအချို့ကိုတကယ်ရှင်းပြသည်” [061, 31 နှစ်]) နှင့် ၂၀၁၂ TEDx ဟောပြောချက် (TEDx) စကားပြော 2012; ဥပမာ၊ “ မနေ့ကအလွန်ကြီးမားသော PORN EXPERIMENT ကိုကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တယ်၊ အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးသိကောင်းစရာများ” [104, ၅၂ နှစ်]] သည်အဖွဲ့ဝင်များမှမကြာခဏဖော်ပြခဲ့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ ဦး နှောက်အပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းများအပေါ်အထူးသြဇာညောင်းသောအရင်းအမြစ်များဖြစ်သည်။ "ဤသက်ရောက်မှုနောက်ပြန်ဆုတ်ဖို့သင့်လျော်သောဖြေရှင်းချက်အဖြစ်။ "
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲစွဲစွဲလမ်းမှုကိုဖော်ပြသောအဖွဲ့ဝင်အချို့အတွက် abstinence ကိုပြန်လည်နာလန်ထူရန်တစ်ခုတည်းသောဖြစ်နိုင်ခြေနည်းလမ်းအဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့သည်။ အများအားဖြင့် abstinence အတွင်းမည်သည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံကိုမဆိုအသုံးပြုခြင်းသည် ဦး နှောက်တွင်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီးတွန်းအားများနှင့်ထပ်မံဖြစ်ပွားခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အကျိုးဆက်အားလုံးလုံးလျားလျားရှောင်ကြဉ်မည့်အစားအတန်အသင့်ပါ ၀ င်ရန်ကြိုးစားခြင်းကိုမရေမတွက်နိုင်သောဗျူဟာတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့သည်။
ငါ porn နှင့်လုံးဝကြည့်ရှုရန်ထိုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းသောအကြောင်းအရာများကိုလုံးဝရပ်တန့်ရန်လိုအပ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် nsfw [အလုပ်အတွက်လုံခြုံမှုမရှိသော] အကြောင်းအရာများကိုကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုသောအခါကျွန်ုပ် ဦး နှောက်ထဲတွင်လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖန်တီးပြီး၊ ကျွန်ုပ် ဦး နှောက်ကိုတိုက်တွန်းသည့်အခါ၊ ထို့ကြောင့် p နှင့် m အအေးကြက်ဆင်ကိုဖြတ်ခြင်းသည်ဤ shit မှပြန်လည်လွတ်မြောက်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ” (008, 18 နှစ်)
တစ်ခါတစ်ရံ abstinence မဖြစ်နိုင်ပုံရသည်
ဒုတိယဆောင်ပုဒ်သည်အသင်း ၀ င်များ၏“ rebooting” အတွေ့အကြုံများမှအထင်ရှားဆုံးသောအင်္ဂါရပ်ကိုဖော်ပြသည် - ၎င်းသည် abstinst ကိုအောင်မြင်စွာဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်မည်မျှခက်ခဲသည်ကိုဖော်ပြသည်။ အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ကဖော်ပြသကဲ့သို့တစ်ခါတစ်ရံတွင် abstinence သည်အလွန်ခက်ခဲသောကြောင့်အောင်မြင်ရန်မဖြစ်နိုင်ပုံရသည်
ပြန်လည်ပတ်မှုတစ်ခုလုံးပြီးနောက်ကျွန်တော် Struggle St. ငါဘယ်လိုအောင်မြင်စွာဖြတ်နိုင်မလဲဆိုတာမသေချာဘူး၊ တစ်ခါတစ်ရံမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ရတယ်။ (၀၄၀၊ ၃၀)
တားဆီးပိတ်ပင်ခြင်းကိုရရှိရန်အခက်အခဲဖြစ်စေသောအဓိကအချက်သုံးချက်မှာ“ reboot” အတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသွားလာမှု၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုရန်အတွက်ရှောင်လွှဲမရသောပုံသဏ္,ာန်နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည်လိမ္မာပါးနပ်။ လူမိုက်အဖြစ်ခံစားခဲ့ရသည်။
“ Reboot” အတွင်းလိင်မှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းရှာခြင်း
လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းအစတွင်အသင်း ၀ င်များမှပြုလုပ်ရမည့်ခက်ခဲသောဆုံးဖြတ်ချက်မှာ“ reboot” အတွင်းလက်ခံနိုင်သောလိင်မှုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီးဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံမပါဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ပူးပေါင်းလိင်ဆက်ဆံခြင်းမှတဆင့်အော်ဂဇင်ပြုခြင်းကိုကာလတိုတွင်ခွင့်ပြုသင့်သလား။ အသင်းဝင်များစွာအတွက်ရေရှည်ရည်မှန်းချက်မှာလိင်မှုကိစ္စကိုလုံးဝဖယ်ရှားပစ်ရန်မဟုတ်ဘဲ“ လိင်ဆိုင်ရာလိင်မှုအသစ်” (၀၃၃၊ ၂၅ နှစ်) ကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများမပါဘဲပြန်လည်လေ့လာသင်ယူရန်ဖြစ်သည်။ ဤအရာသည်တွဲဖက်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ "ငါတို့လိုချင်တာကငါတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့ကျန်းမာတဲ့သဘာဝလိင်ဆက်ဆံမှုပါပဲ။ ” ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများမပါဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့် (သို့မဟုတ်) တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း (ဥပမာ၊ “ ငါကခေတ်မှီ MO နှင့်အဆင်ပြေသည်။ ထိုအရာကိုကျန်းမာသောနည်းလမ်းဖြင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု၏ဆိုးကျိုးများမရှိဘဲစီမံခန့်ခွဲရန်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုထင်မြင်သည်။" [061, 31 နှစ်] ။ သို့သော်ပိုမိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်မှာရေတိုကာလအတွင်းဤအပြုအမူများကိုခွင့်ပြုခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြင့်တိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေမည်လားဆိုသည်ပင်ဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်တွင်၊ အချို့သောအဖွဲ့ ၀ င်များကဤလှုပ်ရှားမှုများအားကန့်သတ်တားမြစ်ခြင်းအတွက်ခြိမ်းခြောက်မှုဟုခံယူထားကြပြီးအဓိကအားဖြင့်“ chaser effect” ဟုခေါ်ဆိုသောကြောင့်၎င်းလှုပ်ရှားမှုများအားခွင့်ပြုခြင်းကိုလက်ခံခဲ့သည်။ အဆိုပါ "chaser အကျိုးသက်ရောက်မှု" လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအပြီးပေါ်ထွန်းသော PMO အားပြင်းထန်သောတပ်မက်ခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည် (Deem, 2014a) ။ အချို့သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှစ်ခုလုံးအပြီးတွင်ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရကြောင်းတင်ပြကြသည် (ဥပမာ -“ ငါ ပို၍ စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ညစ်ညမ်းမှုပိုမိုများပြားလာသည်ကိုတွေ့ရသည်” [050, 33 နှစ်]) နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှု (ဥပမာ -“ မိန်းမနှင့်လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်တွင်သတိပြုမိသည်။ နောက်မှတိုက်ပွဲများပြင်းထန်လာသည်။ ” [043, 36 years]) ဤအဖွဲ့ ၀ င်များအနေဖြင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်လက်တွဲဖော်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုအချိန်ကာလတစ်ခုအထိခေတ္တရှောင်ကြဉ်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူအခြားအဖွဲ့ဝင်များအတွက်၊ လိင်မှုကိစ္စကိုလုံးဝရှောင်ကြဉ်ခြင်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲလမ်းစေသည့်အရာများဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုသတင်းများရရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ဤအသင်း ၀ င်များအတွက်“ reboot” အတွင်းလိင်ထုတ်လွှင့်မှုရှိခြင်းသည်တိုးတက်မှုကိုအဟန့်အတားမဖြစ်စေနိုင်သော်လည်းအမှန်မှာသူတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုရှောင်ရှားနိုင်စွမ်းကိုကူညီခဲ့သည်။ ငါ porn ကိုအသုံးပြုရန်ဆင်ခြေတက်စပြုရန်နည်းပါးသည် "[061, 36 နှစ်]) ။
ဝိရောဓိအနေဖြင့်အသင်း ၀ င်သုံးပုံတစ်ပုံနီးပါးကလိင်ဆန္ဒပိုမိုတိုးပွားလာခြင်းထက်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုလျော့နည်းစေသည်ဟုခံစားခဲ့ရကြောင်းအသင်း ၀ င်သုံးပုံတစ်ပုံနှင့်နီးစပ်သူများကပြောကြားခဲ့သည်။ “ flatline” ဆိုသည်မှာ abstinence အတွင်းလိင်စိတ်သိသိသာသာကျဆင်းခြင်းသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးခြင်းကိုအဖွဲ့ဝင်များကဖော်ပြသောအသုံးအနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည် (အချို့သည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့်အတူလိုက်ပါလာခြင်းနှင့်အတူစိတ်ဓာတ်နိမ့်ခြင်းနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့် disengagement ဟူသောခံစားချက်တို့ပါ ၀ င်သည်။ ငါဟာအခုအချိန်မှာအလိုက်သင့်နေတတ်တယ်လို့ခံစားရတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လိင်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုခုမှာပါ ၀ င်ချင်တဲ့ဆန္ဒမရှိသလောက်နီးပါးဖြစ်နေတယ်။ ” [056, 30s]) လိင်ဆန္ဒကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်၌ပြန်လည်ရောက်ရှိမည်ကိုသေချာမသိခြင်းသည်အချို့အတွက်စိတ်ရှုပ်ထွေးစေသည်။ “ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်ခံစားမိသောအခါပုံမှန်အော်ဂဇင်မရရှိပါက၊ အသက်ရှင်နေထိုင်ရခြင်း၏အကြောင်းရင်းကားအဘယ်နည်း။ ” [089, 42 နှစ်]) ဤအသင်း ၀ င်များအတွက်သွေးဆောင်မှုမှာ PMO သို့သူတို့လိင်အင်္ဂါဆက်လက်အလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိ“ စမ်းသပ်” ရန်ဖြစ်သည်။ “ ပြားချပ်ချပ်” တွင် (ဥပမာ၊ “ မကောင်းတာက၊ ငါ့ဘောင်းဘီထဲမှာလုပ်သင့်လုပ်သင့်လုပ်သင့်လုပ်နေသလားဆိုတာစပြီးတွေးမိတာပါပဲ” [068, 35 နှစ်]) ။
အသင်းသားများစွာအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုခြင်းမှအထူးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်စေသောအရာမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုရန်တွန်းအားများ၏အတွေးများကိုရှောင်ရှား။ မရသောပုံများဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး စွာအပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုရန်အတွက်နေရာအနှံ့အပြားတွင်ထင်သာမြင်သာရှိသည်။ ပြင်ပအစပျိုးမှု၏အသုံးအများဆုံးရင်းမြစ်မှာအီလက်ထရွန်နစ်မီဒီယာ (ဥပမာ -“ ချိန်းတွေ့သောဆိုက်များ၊ Instagram၊ Facebook၊ ရုပ်ရှင်၊ တီဗွီ၊ YouTube၊ အွန်လိုင်းကြော်ငြာများအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ထပ်မံဖြစ်ပွားမှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်”) [050, 33 years] ။ ရုပ်မြင်သံကြားပြပွဲတစ်ခုသို့မဟုတ်လူတစ် ဦး ၏လူမှုရေးမီဒီယာများမှပေါ်ထွက်လာသောလိင်မှုကိစ္စကိုနှိုးဆွသောအကြောင်းအရာများ၏ခန့်မှန်းရခက်ခြင်းကအင်တာနက်ကိုပေါ့ပေါ့ပါးပါးကြည့်ရှုခြင်းသည်အန္တရာယ်များနိုင်သည်။ စစ်မှန်သောအသက်တာ၌လိင်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောလူများကိုတွေ့မြင်ခြင်းသည်အချို့သောအသင်းဝင်များအတွက်အစပျိုးခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည် (ဥပမာ -“ ငါဒီနေ့ငါသွားမယ့်အားကစားရုံထဲကနေထွက်လာတယ်။ မိန်းမတွေကနေတစ်ဆင့်ယောဂဘောင်းဘီတွေတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ယောဂဘောင်းဘီကိုကြည့်ဖို့သိပ်များလွန်းတယ်” [072, 57 နှစ်) ]) ဆိုလိုသည်မှာအွန်လိုင်းသို့မဟုတ်အော့ဖ်လိုင်းအရလိင်နှိုးဆွသောမည်သည့်အရာကိုမဆိုကြည့်ခြင်းသည်အစပျိုးနိုင်သည်။ ထို့အပြင်အသင်းဝင်များသည်သူတို့အိပ်ခန်းထဲတွင်တစ်ယောက်တည်းနေစဉ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုမကြာခဏကြည့်ရှုလေ့ရှိခြင်းသည်၎င်းတို့၏ပုံမှန်ချက်ချင်းပတ် ၀ န်းကျင်သည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်ဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ (ဥပမာ -“ ငါအိပ်ရာပေါ်မှာအိပ်ပြီးရုံနဲ့ဘာမှလုပ်စရာမရှိတော့ဘူး”) 021, 24 နှစ်]] ။
ဒုတိယအနေနှင့်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းအတွက်အဓိကအချက်များ (အဓိကအားဖြင့်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သောပြည်နယ်များ) လည်းရှိသည်။ အဖွဲ့ဝင်များသည်အပျက်သဘောသက်ရောက်မှုများကိုထိန်းညှိရန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကိုမကြာခဏမှီခိုခဲ့ကြသောကြောင့်မသက်မသာသောစိတ်ခံစားမှုများသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုအတွက်အခြေခံအကြောင်းအရင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ အချို့သောအသင်းဝင်များမှ၎င်းတို့သည်ဆိုးဆိုးရွားရွားဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုခံစားခဲ့ရကြောင်း၊ အချို့သူများကဤဆိုးကျိုးသက်ရောက်သည့်ပြည်နယ်များကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းအားပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းဟုအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူကြသည်။ (ဖြစ်နိုင်သော) အဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူသောအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးသက်ရောက်မှုသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများတွင်“ ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများ” တွင်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ စိတ်အပြောင်းအလဲများ၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ “ ဦး နှောက်မြူ” ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အခြားအဖွဲ့ဝင်များသည်အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုကိုရုပ်သိမ်းခြင်းအားအလိုအလျောက်မသတ်မှတ်သော်လည်းအပျက်သဘောဆောင်သောဘဝအဖြစ်အပျက်များ (ဥပမာ -“ လွန်ခဲ့သောသုံးရက်ကကျွန်ုပ်သည်အလွယ်တကူစိတ်လှုပ်ရှားမှုရနေကြောင်းတွေ့ရှိရပြီး၎င်းသည်အလုပ်ဖြစ်မလားမသိ) စိတ်ပျက်သို့မဟုတ်ဆုတ်ခွာ "[046, 30]] ။ အချို့အဖွဲ့ဝင်များက၎င်းတို့သည်ယခင်ကညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုအခြေအနေများကိုရေတွက်ရန်အတွက်ကြောင့်၊ "ပြန်လည်တွန်းအားကြောင့်ဤစိတ်ခံစားမှုများသည်အလွန်ပြင်းထန်သလားကျွန်ုပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကတွေးမိသည်" [032, 28 နှစ်]) ။ မှတ်သားစရာမှာအသက် ၁၈ နှစ်မှ ၂၉ နှစ်အတွင်းရှိသူများသည်အခြားအသက်နှစ်အုပ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် astinin တွင်အခြားဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းဖော်ပြနိုင်ပြီး၊ အသက် ၄၀ နှင့်အထက်သည် abstinence အတွင်းရှိ“ ဆုတ်ခွာခြင်းနှင့်တူသော” လက္ခဏာများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်လျော့နည်းစေသည်။ အခြားအသက်အရွယ်အုပ်စုနှစ်စု။ ဤအပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုများ (ဥပမာ၊ ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ အပျက်သဘောဆောင်သောဘဝဖြစ်ရပ်များသို့မဟုတ်တိုးပွားလာပြီးဖြစ်သောလက်ရှိစိတ်ခံစားမှုအခြေအနေများ) မည်သို့ပင်ဖြစ်စေအသင်းသားများအနေဖြင့်အပျက်သဘောဆောင်သောဆိုးကျိုးများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမိမိကိုယ်ကိုဆေးဝါးမသောက်သုံးဘဲဖြေရှင်းရန်ခက်ခဲသည်။ ။
အဆိုပါ Relapse လုပ်ငန်းစဉ်၏ Insidiousness
နမူနာ၏ထက်ဝက်ကျော် (n = ၅၅) သူတို့ရှောင်ကြဉ်ရန်ကြိုးပမ်းစဉ်အနည်းဆုံးချုံးတစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၂၉ နှစ်အတွင်းရှိအဖွဲ့ ၀ င်များကအနည်းဆုံးပြန်လည်ထူထောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။n = 27 သည်အခြားအသက်အုပ်စုနှစ်ခုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်: 30-39 နှစ်ပေါင်း (n = 16) နှင့်အနှစ် 40 နှင့်အထက် (n = 12) ။ Relapse သည်ပုံမှန်အားဖြင့်အဖွဲ့ဝင်များကိုအစောင့်အရှောက်မဲ့သောသူတို့ကိုဖမ်းဆီးပြီးချက်ချင်းပင်စိတ်သောကရောက်စေသည့်အရူးအမူးဖြစ်စဉ်တစ်ခုနှင့်တူသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ချို့ယွင်းမှုများဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသောနည်းနှစ်နည်းရှိသည်။ ပထမတစ်ခုမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုလိုစိတ်ကြောင့်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အစပျိုးခြင်းဖြစ်သည်။ တဏှာသည်တစ်ခါတစ်ရံစီမံခန့်ခွဲနိုင်သော်လည်းအခြားအချိန်များတွင်တပ်သည်အလွန်ပြင်းထန်လွန်းသဖြင့်၎င်းကိုလွှမ်းမိုးပြီးမထိန်းချုပ်နိုင်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ တဏှာပြင်းထန်သည့်အခါအချို့သောအသင်းဝင်များက၎င်းသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်“ စွဲလမ်းနေသော ဦး နှောက်” အားပြန်လည်ထူထောင်ရန်လှည့်စားနေသည့်အလားပြန်လည်စဉ်းစားရန်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာနည်းလမ်းများဖြင့်လိုက်ပါသွားကြောင်းပြောကြားခဲ့သည် -
ငါ၌ porn ကိုကြည့်ရှုရန်မယုံနိုင်လောက်အောင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းမှုရှိသည်။ “ ငါ့ရဲ့ ဦး နှောက်နဲ့အတူ "ဒီနောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်နိုင်တယ် ... " "လာပါ၊ သေးသေးလေးသေးသေးလေးတစ်ခုသာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသင်ထင်ပါသလား" “ ဒီနေ့ပဲ၊ နက်ဖြန်နေ့မှတဖန်ငါရပ်ပြန်သည်”“ ငါဒီနာကျင်မှုကိုရပ်တန့်ရမယ်၊ အဲဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာတစ်လမ်းတည်းပဲ” …ဒါကြောင့်အခြေခံအားဖြင့်နေ့လည်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဟာနည်းနည်းလေးအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်၊ စဉ်ဆက်မပြတ်တိုက်တွန်း (089, 42 နှစ်)
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုကိုထင်ရှားစေသည့်ဒုတိယနည်းလမ်းမှာပြင်းထန်သောဆန္ဒများမရှိသော်ငြားတစ်ခါတစ်ရံ၌“ autopilot” တွင်“ ဖြစ်ပျက်ခြင်း” ဖြစ်ပုံရသည်၊ တစ်ခါတစ်ရံ၌ relapse သည်ဖြစ်ပျက်နေသလိုခံစားရသည့်အချက်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကို (ဥပမာ, "ငါ autopilot သို့မဟုတ် somethin '' နဲ့တူရဲ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြင်ဘက်ကနေကြည့်နေရင်းကျွန်တော်သေပြီ၊ ဘာမှမရှိတဲ့ထိန်းချုပ်မှုမရှိတော့ဘူး" [034, 22 နှစ်]) ။ အသင်း ၀ င်များသည်အွန်လိုင်းမှလိင်မှုနှိုးဆွပေးသောအကြောင်းအရာများကိုမသိရှိစွာရှာဖွေနေသောအခါ (ဥပမာ၊ YouTube ကို) သည်“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ” (နည်းပညာအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ) အဖြစ်အရည်အချင်းမပြည့်မှီပါ။ ထို“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအစားထိုးသူများ” ကိုရှာဖွေခြင်းသည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်ချုံးသွားခြင်းဖြစ်သည်။
abstinence သည်အခက်အခဲရှိသော်လည်းအသင်း ၀ င်များစွာသည် abstinence ကိုမှန်ကန်သောအရင်းအမြစ်များဖြင့်ရရှိနိုင်သည်ဟုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အဖွဲ့ဝင်များကို asstinst ကိုအောင်မြင်စွာဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန်အတွက်ပြင်ပနှင့်ပြည်တွင်းအရင်းအမြစ်များကိုပေါင်းစပ်ခြင်းကအဓိကကျသည်။
ပြင်ပအရင်းအမြစ်များ - လူမှုအထောက်အပံ့နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုရန်အတားအဆီးများ
အသင်း ၀ င်များစွာအတွက်လူမှုရေးထောက်ပံ့မှုသည်အဓိကကျသည့်ပြင်ပအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့ဝင်များ၊ မိသားစု၊ မိတ်ဖက်များ၊ မိတ်ဆွေများ၊ အထောက်အကူပြုအဖွဲ့များ (ဥပမာ ၁၂ ဆင့်ပါအုပ်စုများ) နှင့်ကုထုံးပညာရှင်များအပါအ ၀ င်ရင်းမြစ်အမျိုးမျိုးမှအထောက်အပံ့များရရှိသည်ကိုအဖွဲ့ဝင်များကဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သော်အွန်လိုင်းဖိုရမ်ကိုယ်တိုင်သည်အသင်းဝင်များအတွက်အများဆုံးထောက်ခံသည့်အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ အခြားအသင်းသားများ၏ဂျာနယ်များ (အထူးသဖြင့်အောင်မြင်မှုအဖြစ်အပျက်များ) ကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ပိုင်ဂျာနယ်တွင်အထောက်အပံ့ပေးသောမက်ဆေ့ခ်ျများရရှိခြင်းသည်အဖွဲ့ဝင်များအတွက်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အားပေးမှု၏အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ "အခြားဂျာနယ်များနှင့်အခြားပို့စ်များကိုတွေ့ရခြင်းကကျွန်ုပ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးပြီးငါတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဟုခံစားရစေသည်" [032, 28 နှစ်]) ။ အချို့အဖွဲ့ဝင်များသည်အခြားဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး အား ၄ င်းတို့၏တာ ၀ န်ခံမှုဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ဖြစ်ရန်တောင်းဆိုခြင်းအားဖြင့်ထပ်မံပံ့ပိုးမှုကိုတောင်းခံခဲ့ကြသည်။ သို့သော်အခြားအဖွဲ့ဝင်များအတွက်မူဖိုရမ်ရှိဂျာနယ်တစ်ခုတည်းကိုသာထိန်းသိမ်းထားခြင်းသည်တာ ၀ န်ခံမှုပိုမိုများပြားလာသည်ကိုခံစားရရန်လုံလောက်သည်။ အချို့အဖွဲ့ဝင်များကရိုးသားစွာခွဲဝေမှုနှင့်တာ ၀ န်ခံမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်လှုံ့ဆော်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်သူတို့၏စွမ်းရည်သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ "လူသိရှင်ကြားကျိန်ဆိုခြင်းနှင့်ပြည်သူလူထု၏ကတိကဝတ်သည်ယခုကွဲပြားနေသည်။ တာဝန်ခံမှု။ ၎င်းသည်လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၃၀ အတွင်းပျောက်ဆုံးနေသောဒြပ်စင်ဖြစ်သည်" [089, 42 နှစ်]) ။
အသင်းအဖွဲ့များမှရှောင်ကြဉ်ခြင်းကာလအတွင်းအဖွဲ့ဝင်များမှအသုံးပြုသောအခြားဘုံပြင်ပအရင်းအမြစ်တစ်ခုမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုရန်လွယ်ကူသောအတားအဆီးများဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအကြောင်းအရာများကိုပိတ်ဆို့ထားသောသူတို့၏ပစ္စည်းကိရိယာများတွင် application များတပ်ဆင်ခြင်းကိုအဖွဲ့ဝင်များကတင်ပြကြသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဤ application များသည်၎င်းတို့ကိုကျော်လွှားရန်နည်းလမ်းများဖြစ်သောကြောင့်အကန့်အသတ်ရှိသည်ဟုတွေ့ရှိရသော်လည်း၎င်းတို့သည်အားနည်းချက်ရှိသောအခိုက်အတန့်တစ်ခုအတွင်းဝင်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်သောအပိုအတားအဆီးတစ်ခုဖန်တီးရန်အသုံးဝင်သည်။ "ငါ K9 ကို web-blocker ပြန်တပ်ချင်တယ်။ ငါကကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူကသတိပေးချက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်" [100, နှစ်ပေါင်း 40]) ။ အခြားနည်းဗျူဟာများမှာလူတစ် ဦး ၏အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများကိုအစပျိုးမှုနည်းသောပတ်ဝန်းကျင် (ဥပမာ - ဘယ်သောအခါမျှအိပ်ခန်းတွင်လက်ပ်တော့အား သုံး၍ မရ၊ လက်ပ်တော့သုံးပါက) သို့မဟုတ်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများကိုလုံး ၀ ကန့်သတ်ခြင်း (ဥပမာ - သူတို့၏စမတ်ဖုန်းကိုသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နှင့်ခေတ္တထားခြင်း) တို့ဖြစ်သည်။ စမတ်ဖုန်းမဟုတ်သောလက်ကိုင်ဖုန်းအတွက်၎င်းတို့၏စမတ်ဖုန်းကိုစွန့်လွှတ်ခြင်း) ။ ယေဘုယျအားဖြင့်အဖွဲ့ဝင်များမှပြင်ပအတားအဆီးများကိုအသုံး ၀ င်သည်ဟုရှုမြင်သော်လည်း၎င်းသည်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများမှမည်သည့် ၀ င်ရောက်မှုကိုမဆိုလုံးဝရှောင်ရှားရန်လက်တွေ့မကျသောကြောင့်နှင့် abstinst ကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက်လုံလောက်မှုမရှိသည်သာမကပြည်တွင်းအရင်းအမြစ်များကိုလည်းလိုအပ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ပြည်တွင်းအရင်းအမြစ်များ - သိပ္ပံနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာများရှိသောအာဆင်နယ်
အဖွဲ့ဝင်အများစုကသူတို့၏ abstinence ကိုကူညီရန်အတွင်းပိုင်းအရင်းအမြစ်များ (ဥပမာ - သိမှုနှင့် / သို့မဟုတ်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာများ) ကိုအသုံးပြုသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုနည်းဗျူဟာများ (ဥပမာ - လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်း၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်း၊ အလုပ်များနေခြင်း၊ မကြာခဏထွက်ခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအိပ်စက်ခြင်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များရှိခြင်း) ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအခြေအနေများနှင့်တပ်မက်မှု၏ကြိမ်နှုန်းကိုလျှော့ချရန်လူနေမှုပုံစံစတဲ့အပြောင်းအလဲ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာဗျူဟာများသည်အဖွဲ့ဝင်များမှချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပေါ်နိုင်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများ (ဥပမာ - ခဏတပ်မက်ခြင်းနှင့်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ) ကိုထိန်းညှိရန်လေ့ကျင့်မှုနှင့်အမှားစမ်းသပ်မှုများမှရှောင်ကြဉ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုအပေါ်အဖွဲ့ဝင်များမှစုဆောင်းခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုရန်သွေးဆောင်ခြင်းထက်ပေးကမ်းခြင်းထက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတွက်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုသည်အခြားအန္တရာယ်ရှိသောမဟုတ်သည့်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းဖြစ်သည်။ အသင်းဝင်အချို့ကရေကိုသောက်ခြင်းသည်တုန်လှုပ်ချောက်ချားမှုကိုတိုက်ဖျက်ရာတွင်အထူးသဖြင့်ထိရောက်သည်ဟုဆိုသည်။ (ဥပမာ -“ ဒီညငါအရမ်းကိုချိုလွန်းနေတယ်။ ဒါကြောင့်ညနေ ၁၀ နာရီမှာအရမ်းအေးတဲ့ရာသီဥတုနှင့်စည်ကားနေတဲ့အချိန်မှာငါအရမ်းအေးတဲ့ရေချိုးခန်းကိုယူလိုက်တယ်။" [008, 18 နှစ်]) ။ အပြာစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ပတ်သက်သောအတွေးများကိုဖိနှိပ်ရန်ကြိုးစားခြင်းသည်အသုံးများသောသိမြင်မှုနည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်အဖွဲ့ဝင်များသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှဖိနှိပ်မှုသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသည်ဟုယူမှတ်ကြသည်။ "ငါ 'PMO ကိုမစဉ်းစားပါ၊ PMO အကြောင်းမစဉ်းစားပါ၊ ဒါကငါ့ကိုရူးသွပ်စေပြီး PMO ကိုစဉ်းစားစေတယ်" [099, 46 နှစ်]) ။ အသင်းဝင်များအသုံးပြုသောအခြားအသုံးများသောသိမြင်မှုဆိုင်ရာနည်းဗျူဟာများမှာသတိနှင့်သက်ဆိုင်သောနည်းစနစ်များ (ဥပမာ - တပ်မက်ခြင်းသို့မဟုတ်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားချက်ကိုလက်ခံခြင်းနှင့်“ စီးခြင်း”) နှင့်သူတို့၏အတွေးအခေါ်ကိုပြုပြင်ရန်ဖြစ်သည်။ သူတို့၏တွန်းအားများကြုံတွေ့နေကြရသဖြင့်သို့မဟုတ်ချုံးပြီးနောက်ချက်ချင်းပင်အဖွဲ့ဝင်များသည်မိမိကိုယ်ကိုပြောဆိုရန်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အကူအညီမဲ့သောအတွေးအခေါ်ကိုပြုပြင်ရန်အဖွဲ့ဝင်များအတွက်အထူးအသုံးဝင်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပုံရသည်။
abstinence ကိုစွဲစွဲမြဲမြဲအသုံးပြုသောအသင်းဝင်များသည်အခက်အခဲများကြားမှ၎င်းသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောအတွေ့အကြုံဖြစ်ကြောင်းပုံမှန်အားဖြင့်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အသင်း ၀ င်တစ် ဦး ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းရရှိသောဆုလာဘ်များကြောင့် abstinence ၏နာကျင်မှုသည်ကျိုးနပ်ပါသည်။ "ဒါဟာလွယ်ကူသောစီးနင်းမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်လုံးဝတန်ဖိုးရှိခဲ့ပါတယ်" (061, 31 နှစ်) ။ ဖော်ပြထားသောအထူးအကျိုးကျေးဇူးများတွင်ထိန်းချုပ်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းအပြင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ လူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်တိုးတက်မှုများပါ ၀ င်သည်။
အချို့သောအသင်းဝင်များမှဖော်ပြခဲ့သည့်တားမြစ်ခြင်း၏အဓိကရိပ်မိသောအကျိုးကျေးဇူးမှာသူတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့၏ဘ ၀ အပေါ်ထိန်းချုပ်မှုသဘောကိုပြန်လည်ရရှိရန်ဖြစ်သည်။ abstinst ကာလပြီးနောက်အသင်းဝင်များသည်၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆားငန်ခြင်း၊ တပ်မက်ခြင်း၊
ကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းသောအလိုဆန္ဒများသည်ကျဆင်း။ ကျွန်ုပ်၏တွန်းအားများကိုတိုက်ထုတ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ငါယခုမှာအားလုံးစဉ်းစားခဲရှာပါ။ ငါအရမ်းကိုဝမ်းသာမိတယ်၊ ဒီ reboot ကငါအရမ်းဆိုးချင်တာကိုငါ့အပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့တယ်။ (061, 31 နှစ်)
အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိအောင်မြင်စွာရှောင်ကြဉ်ခြင်းကိုလည်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းအပေါ်ချုပ်တည်းခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်မိမိကိုယ်မိမိထိရောက်မှုကိုတိုးပွားစေသည် (ဥပမာ၊ "ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုရှောင်ရှားရန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချုပ်တည်းနိုင်စွမ်းရှိသည်ဟုထင်ရသည်” [004, 18 နှစ်]) အချို့အဖွဲ့ဝင်များကသူတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကိုချုပ်တည်းခြင်းအားဖြင့်ဤအသစ်တွေ့ရှိရသောချုပ်တည်းမှုသည်သူတို့၏ဘဝအခြားဒေသများသို့လည်းပျံ့နှံ့သွားသည်ဟုယူဆကြသည်။
အဖွဲ့ဝင်များစွာသည်၎င်းတို့သည် astinence မှစွပ်စွဲထားသောအပြုသဘောဆောင်သောသိမြင်မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် / သို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုအမျိုးမျိုးကိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည်လင်ပြတ်သားမှု၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချမှု၊ လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားများအပါအ ၀ င်နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများတိုးတက်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအသုံးအများဆုံးအပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ "ညစ်ညမ်းခြင်း၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများမရှိ၊ ကျွန်ုပ်တို့၌စွမ်းအင်၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းမှု၊ ပျော်ရွှင်မှု၊" [024, 21 နှစ်]) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနည်းပါးလာခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏စိတ်ခံစားမှုကိုပိုမိုပြင်းထန်စွာခံစားနိုင်စွမ်းရှိခြင်းကိုအဖွဲ့ဝင်များကသိမြင်ခဲ့သည်။ "ငါသာနက်ရှိုင်းသောအဆင့်တွင် '' ခံစား '' ။ အလုပ်များ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်အတိတ်ကာလများ၌ကောင်းသောနှင့်ဆိုးသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုများစွာရှိခဲ့သော်လည်း၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသည်" [019, 26 နှစ်]) ။ အချို့သူများအတွက်မူယင်းသည်တိုးမြှင့်အတွေ့အကြုံများနှင့်သာမန်နေ့စဉ်အတွေ့အကြုံများမှပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားနိုင်စွမ်းတိုးပွားလာစေခဲ့သည် (ဥပမာ - `လူမှုရေးနှင့်တူသောအရာများ၊ သေးငယ်သောအရာများနှင့်အရာများအကြောင်းကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်သည် ပို၍ စိတ်လှုပ်ရှားစေနိုင်သည်။ စက္ကူတစ်ခုရေးခြင်းသို့မဟုတ်အားကစားကစားခြင်း" [024, 21 နှစ်]) ။ သတိပြုရမည့်အချက်မှာအသက် ၁၈ နှစ်မှ ၂၉ နှစ်အတွင်းရှိအဖွဲ့ ၀ င်များကရှောင်ကြဉ်ခြင်းကာလအတွင်းအပြုသဘောသက်ရောက်မှုရှိကြောင်းကိုဖော်ပြခဲ့သည်။n = 16) အခြားအသက်အရွယ်အုပ်စုနှစ်ခု, 30-39 နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ (n = 7) နှင့်≥ 40 (n = 2) ။
လူမှုဆက်ဆံရေးအပေါ် abstinence ၏အပြုသဘောသက်ရောက်မှုကိုလည်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ အချို့သောအဖွဲ့ ၀ င်များကပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်လာခြင်းကိုအစီရင်ခံကြပြီးအချို့ကမူဆက်ဆံရေးတိုးတက်မှုအခြေအနေနှင့်အခြားသူများနှင့်အဆက်အသွယ်တိုးမြှင့်မှုအကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ "ငါအချိန်ကြာမြင့်စွာထက်ငါ့ဇနီးနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာခံစားနေပါတယ်" [069, 30]] ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်တိုးတက်မှုများရိပ်မိခြင်းအပေါ်ရှောင်ကြဉ်ခြင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းမှစွန့်ကြဲခြင်း၏နောက်ဆက်တွဲအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အချို့သောအသင်း ၀ င်များကလက်တွဲဖော်လိင်ဆက်ဆံလိုစိတ်တိုးပွားလာသည်ဟုအစီရင်ခံတင်ပြကြပြီး၎င်းသည်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းမှသာစိတ် ၀ င်စားခြင်းမှရှောင်ကျဉ်ခြင်းကိုလက်ခံသည်။ "ငါအရမ်းချိုလွန်းပေမယ့်ကောင်းတဲ့အရာကငါဟာတခြားလူသားတစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံရတာအရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။ porn သွေးဆောင်အော်ဂဇင်ကိုစိတ်ဝင်စားမဟုတ်" [083, 45 နှစ်]) ။ အချို့သောလိင်အင်္ဂါများမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်လွယ်မှုနှင့်တုန့်ပြန်မှုတုန့်ပြန်မှုများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ asstinence ကြိုးပမ်းမှုအစတွင် erectile အခက်အခဲများကိုတင်ပြသောအဖွဲ့ဝင် ၄၂ ဦး တွင်တစ်ဝက် (n = 21) အချိန်ကာလတစ်ခုအဘို့ကိုရှောင်ကြဉ်ပြီးနောက် erectile function ကိုအနည်းဆုံးအချို့တိုးတက်မှုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဖွဲ့ဝင်အချို့သည် erectile function ကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြန်လာကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည် (ဥပမာ -“ ၆၀% ခန့်သာစိုက်ထူနိုင်သော်လည်းအရေးကြီးသည်မှာ၎င်းသည်ရှိခဲ့သည်” ဖြစ်သည်။ [60, 076 နှစ်]), အခြားသူများကမူ erectile function ကိုလုံးဝပြန်ရောက်သွားသည်။ “ ငါသောကြာနေ့ညနဲ့နောက်ဆုံးညတွေမှာငါနဲ့ဇနီးနဲ့လိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးတယ်၊ အချိန်ကာလနှစ်ခုလုံးသည် ၁၀/၁၀ စိုက်ထူခြင်းတွေဖြစ်ပြီးအချိန်အတော်အတန်ကြာတယ်” [52, 10 နှစ်]] အချို့အဖွဲ့ဝင်များကလိင်သည်ယခင်ကထက်ပိုမိုပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းပြီးကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုရှိကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည် (ဥပမာ -“ လေးနှစ်တာကာလအတွင်းကျွန်ုပ်သည်အကောင်းဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုကို (၂) ကြိမ် (စနေနေ့နှင့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) ရရှိခဲ့သည်” [10, 069 နှစ်]] ။
လက်ရှိအရည်အသွေးလေ့လာမှုမှအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာကြည့်တိုက်“ rebooting” ဖိုရမ်တွင်ပါဝင်သူများကြားတွင်ရှောင်ကြဉ်ခြင်း၏ထူးခြားသောဖြစ်ရပ်များကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ဆွေးနွေးခြင်းမှရှောင်ကြဉ်သောဂျာနယ်များကိုအကြောင်းအရာအလိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်အဓိကအကြောင်းအရာ (၄) ခုပါ ၀ င်သည်။ (၁) ညစ်ညမ်းမှုသည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်ဆိုင်သောပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပါက (၄) ရှောင်ကြဉ်ခြင်းသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည်။ ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏အဓိကပံ့ပိုးမှုမှာ“ rebooting” ဖိုရမ်များမှအဖွဲ့ဝင်များသည်အဘယ်ကြောင့်“ rebooting” တွင်ပါဝင်ရကြောင်းနှင့်“ rebooting” အတွေ့အကြုံသည်အဖွဲ့ဝင်များအနေနှင့်သူတို့၏အမြင်များနှင့်တူသည်ကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသည်။
“ Rebooting” အတွက်အကြောင်းရင်းများ
ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်လူတစ် ဦး ချင်းစီအား“ rebooting” ကိုစတင်ရန်အဘယ်အရာကလှုံ့ဆော်ပေးသည်ကိုအလင်းပေးသည်။ အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏ပြproblemsနာများကိုယုတ္တိရှိသောအဖြေအဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုသုံးမျိုးမှာ“ rebooting” အတွက်အများဆုံးကိုးကားထားသောအကြောင်းများဖြစ်သည် (၁) စွဲစွဲလမ်းမှုကို (n = 73), (2) (ဖြစ်နိုင်သည်) ညစ်ညမ်း - သွေးဆောင်အဖြစ်ယုံကြည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများ (n ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကြောင့်စွပ်စွဲထားသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များ (၃၄)၊n = 31) ။ ဤရွေ့ကားတွန်းအားသေချာပေါက်အပြန်အလှန်သီးသန့်မဟုတ်ခဲ့သတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်အဖွဲ့ဝင် ၃၂ ဦး သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများရှိကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၎င်းကအဖွဲ့ဝင်များအချိုးအစားရှိသည်ဟုဆိုလိုသည် (n ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုကိုမဖော်ပြဘဲလိင်ဆိုင်ရာအခက်အခဲများကိုသတင်းပို့ခြင်း။
ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ခြင်းသည် ဦး နှောက်အပေါ်အပြာစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်း၏ဆိုးကျိုးများကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ကြောင်းအသင်းဝင်များမှယုံကြည်ကြသည်။ ဤယုံကြည်ချက်သည်အာရုံကြောသိပ္ပံဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံဆိုင်ရာသဘောတရားများကိုပေါင်းစပ်။ တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ဆိုင်သောရုန်းကန်မှုများကိုနားလည်စေရန်သိပ္ပံဆိုင်ရာသိပ္ပံနည်းကျအသုံးပြုခြင်းသည်ထူးခြားမှုမရှိသော်လည်းယခင်ကအရည်အသွေးအရည်အသွေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဘာသာရေးနမူနာများ (Burke & Haltom၊ 2020; ပယ်ရီ 2019ဦး နှောက်အပေါ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုဖြန့်ဝေသောအွန်လိုင်းဆိုဒ်များတိုးပွားလာခြင်း (ပုံသဏ္beenာန်နှင့်အညီ) ပေါ်ပေါက်လာသည့်“ rebooting” ယဉ်ကျေးမှုကြောင့်“ rebooting” အသိုင်းအဝိုင်း၏အထူးသဖြင့်လက္ခဏာဖြစ်နိုင်သည် (တေလာ) , 2019, 2020) အထူးသဖြင့် "rebooting" အသိုင်းအဝိုင်း (Hartmann, 2020) ။ ထို့ကြောင့် PPU အတွက်ပြန်လည်ကုစားရန်အသင်း ၀ င်များ၏လှုံ့ဆော်မှုသည် (rebooting) ယဉ်ကျေးမှုနှင့် (အထူးသဖြင့်အကြီးတန်း) အဖွဲ့ ၀ င်များ၏အတွေ့အကြုံများနှင့်အမြင်များကိုစုပေါင်းသတိဖြင့်ရလဒ်အဖြစ်တီထွင်ခဲ့သောစံနှုန်းများမှလွှမ်းမိုးနိုင်သည်။ က "rebooting" လှုပ်ရှားမှုထိခိုက်ကြသူထင်ရှားတဲ့ကိန်းဂဏန်းများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။
သတိပြုရမည့်အချက်မှာကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်မကိုက်ညီသော (Grubbs & Perry, 2019) ဒီနမူနာထဲမှာ "rebooting" အတွက်မကြာခဏကိုးကားအကြောင်းပြချက် (n (ယေဘူယျအားဖြင့်)“ rebooting” ဖိုရမ်များတွင်အဖွဲ့ဝင်များသည်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များ (ဥပမာ - Diefendorf၊ ) အားဖြင့်ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိနိုင်သည်ဟုအကြံပြုထားသည်။ 2015) ။ ဒါတောင်မှကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ဖြစ်နိုင်ချေကိုအဖွဲ့ဝင်များကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့တိတိကျကျမေးမြန်းပြီးနောက်ဆက်တွဲသုတေသနမလုပ်ပဲပယ်ဖျက်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်လက်ရှိဆန်းစစ်မှုအရ“ rebooting” ဖိုရမ်များမှအဖွဲ့ဝင်များသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည် (cf. Imhoff & Zimmer, 2020) အဓိကအားဖြင့်သူတို့ကိုယ်သူတို့အပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းမှရှောင်ကျဉ်ရန်ကူညီခြင်း၏လက်တွေ့ကျသောအကြောင်းပြချက်အတွက် (ဥပမာ -“ reboot” လုပ်ခြင်းသည်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုစွဲလမ်းစေသည်) သူတို့ကသုတ်ရည်ထိန်းထားခြင်း၏ပင်ကိုယ်အကျိုးကျေးဇူးများအပေါ်ယုံကြည်မှုကြောင့်မဟုတ်ပါ။ အချို့သောသုတေသီများ NoFap သဘောတရား (Hartmann, 2020; တေလာ & ဂျက်ဆင်, 2018).
The "Rebooting" အတွေ့အကြုံ
ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းက“ rebooting” အတွေ့အကြုံသည်အဖွဲ့ဝင်များ၏ကိုယ်ပိုင်အမြင်များနှင့်တူသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းအားအောင်မြင်စွာထိန်းသိမ်းခြင်းသည်အလွန်ခက်ခဲသည်။ အရင်းအမြစ်များ (အဓိကအကြောင်းအရာ 2) ။ အကယ်၍ abstinence ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပါက၎င်းသည်ကြိုးစားအားထုတ်ရကျိုးနပ်ပါသည် (Theme 3) ။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အခြေအနေနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များနှင့်အပြန်အလှန်အားဖြင့်အပြန်အလှန်အားဖြင့်စွဲလမ်းမှုကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်များ (ဆိုလိုသည်မှာရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့်တူသောလက္ခဏာများ၊ တဏှာနှင့်ထိန်းချုပ်မှု / ပြန်လည်ထူထောင်မှုဆုံးရှုံးခြင်း) ကြောင့်အကြီးအကျယ်ခက်ခဲသည်ဟုသိမြင်ရသည် (Brand et al ။ , 2019; ဖာနန်ဒက်စ et al ။ , 2020) ။ အသင်း ၀ င်တစ်ဝက်ကျော်က၎င်းတို့ရှောင်ကြဉ်ရန်ကြိုးပမ်းစဉ်အနည်းဆုံးချုံးချိန်းဆိုခဲ့ကြသည်။ ချို့ယွင်းချက်သည်အလေ့အထများ၏ရလဒ် (ဥပမာ -“ autopilot” မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုခြင်း) ၏ရလဒ်ဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်အလွန်တရာပြင်းထန်သောတွန်းအားများကြောင့်ပြင်းထန်သောနှင့်ခုခံရန်ခက်ခဲသည်။ အဖွဲ့ဝင်များကြုံတွေ့ခဲ့ရသောတုန်လှုပ်ချောက်ချားမှု၏ပြင်းထန်မှုနှင့်ပြင်းထန်မှုကိုအဓိကအချက်သုံးချက်မှာ - (၁) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းအတွက်ပြင်ပအချက်အလက်များ၏နေရာအနှံ့ (အထူးသဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြင်အာရုံဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အခန်းတစ်ခန်းထဲတွင်တစ်ယောက်တည်းနေခြင်းကဲ့သို့သောအခြေအနေအခြေအနေများ)၊ (၂) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအတွက်အတွင်းပိုင်းအချက်များ အသုံးပြုခြင်း (အထူးသဖြင့်အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးသက်ရောက်မှု၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်“ reboot” မတိုင်မီမိမိကိုယ်ကိုဆေးဝါးကုသရန်ယခင်ကအသုံးပြုခဲ့သော) နှင့် (1)“ chaser effect” - abstinence အတွင်းလိင်ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှု၏ရလဒ်ဖြစ်သောဆိုးကျိုးများ။ အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၂၉ နှစ်အကြားလူငယ်များသည်အခြားသက်တမ်းနှစ်အုပ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ရှောင်ကြဉ်စဉ်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ချွတ်ယွင်းခြင်းများကြုံတွေ့ရကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ဤတွေ့ရှိချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောရှင်းပြချက်မှာအခြားလိင်အုပ်စုနှစ်ခု (Beutel, Stöbel-Richter, & Brähler) သည်လိင်စိတ်သည်ဤအသက်အရွယ်အုပ်စုအတွက်ပိုမိုမြင့်မားလေ့ရှိသည်။ 2008)၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုလိင်ဆိုင်ရာထုတ်လွှင့်မှုတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန် ပို၍ ခက်ခဲနိုင်သည်။ နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောရှင်းပြချက်တစ်ခုမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းသည် ပိုမို၍ ခက်ခဲလာသည်နှင့်အမျှလူတစ် ဦး တစ်ယောက်အနေဖြင့်အမူအကျင့်တိုးတက်မှုအပေါ်ပိုမိုမှီခိုနေရမှုကြောင့်ပုံမှန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ဤရှင်းပြချက်သည်မကြာသေးမီကတွေ့ရှိချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ပထမဆုံးအကြိမ်ထိတွေ့မှုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏မိမိကိုယ်ကိုစွဲလမ်းမှုနှင့်သိသိသာသာဆက်စပ်နေသည် (Dwulit & Rzymski, 2019bညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပထမဆုံး PPU ထိတွေ့မှု၏အသက်အကြားဖြစ်နိုင်ချေဆက်နွယ်မှုကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြရန်ပိုမိုသုတေသနပြုရန်လိုသည်။
အရေးကြီးသည်မှာအသင်း ၀ င်များ၏အတွေ့အကြုံများကခက်ခဲခြင်းဖြစ်သော်လည်းပုံမှန်မဟုတ်သောအတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပအရင်းအမြစ်များကိုပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ အဖွဲ့ဝင်များသည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုကာကွယ်ရန်ကွဲပြားသောဖြေရှင်းနည်းမဟာဗျူဟာများနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုစမ်းသပ်ရာတွင်ကြံဖန်တီထွင်ခဲ့ကြသည်။ အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်, အဖွဲ့ဝင်များ abstinence ကာလအတွင်းထိရောက်သောပြည်တွင်းရေးအရင်းအမြစ်များ (ဆိုလိုသည်မှာသိမြင် - အပြုအမူမဟာဗျူဟာ) ၏ကျယ်ပြန့် repertoires တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဤစမ်းသပ်မှုနှင့်အမှားအယွင်းချဉ်းကပ်မှု၏အားသာချက်တစ်ခုမှာအသင်းဝင်များသည်စမ်းသပ်မှုနှင့်အမှားများမှတစ်ဆင့်၎င်းတို့အတွက်အလုပ်လုပ်သောပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်စမ်းသပ်မှုများနှင့်အမှားများကိုစမ်းသပ်ခြင်း၏အားနည်းချက်တစ်ခုမှာတစ်ခါတစ်ရံတွင်ထိရောက်မှုမရှိသောပြန်လည်ထူထောင်ရေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနည်းဗျူဟာများကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအတွေးများကိုနှိမ်နင်းရန်ကြိုးစားခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲမက်စေသည့်အတွေးများကိုကိုင်တွယ်ရန်အသုံးပြုသည့်ဘုံအတွင်းရေးမဟာဗျူဟာဖြစ်သည်။ အတွေးနှိမ်နှင်းရေးသည်တန်ပြန်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိသောအတွေးထိန်းချုပ်ရေးနည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့ပြီး၎င်းသည်ပြန်လည်ထိရောက်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာထိုဖိနှိပ်ထားသောအတွေးများကိုတိုးပွားစေသည် (Efrati ကိုကြည့်ပါ။ 2019; Wegner, Schneider, Carter, & White, 1987) ။ ၎င်းသည်အတော်အတန်အသုံးများသောနည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ကြိုးစားသူများ၊ အထူးသဖြင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုသမှုနယ်ပယ်ပြင်ပ၌အတွေးနှိမ်နင်းခြင်းကဲ့သို့သောထိရောက်သောမဟာဗျူဟာများကိုမသိဘဲထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာပေးခြင်းမှအကျိုးကျေးဇူးများရရှိစေမည်ဟုအကြံပြုထားသည် abstinence ။ ဤတိကျသောဥပမာ (နှင့်“ rebooting” လုပ်စဉ်အဖွဲ့ဝင်များရင်ဆိုင်နေရသောစိန်ခေါ်မှုအမျိုးမျိုး) သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုထိရောက်စွာထိန်းညှိရာတွင် PPU နှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီကိုကူညီပံ့ပိုးရန်နယ်ပယ်မှဖွံ့ဖြိုးပြီး၊ မွမ်းမံ။ ဖြန့်ဖြူးသောပင်ကိုယ်မူလပံ့ပိုးမှုပေးသောကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှု၏အရေးကြီးမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ သတိ -based အရည်အချင်းများဆုံးမဝါဒပေးဆောင်ရွက်မှု, ဥပမာ, အဖွဲ့ဝင်များကကြုံတွေ့စိန်ခေါ်မှုများအများအပြား (Van Gordon က, Shonin, & Griffiths က, ဖြေရှင်းရန်အထူးသဖြင့်သင့်လျော်ပုံပေါ်ပါတယ် 2016) ။ တရားသဖြင့်မဟုတ်သောဆုံးဖြတ်ချက်များကိုလက်ခံရန်သင်ယူခြင်းသည်သိလိုစိတ်နှင့်စွဲမက်ခြင်း၏အတွေ့အကြုံကိုဖိနှိပ်မည့်အစား၎င်းကိုစွဲလမ်းမှုနှင့်ထိရောက်သောထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည် (Twohig & Crosby, 2010; ဝစ်ကေးဝစ်၊ Bowen၊ ဒေါက်ဂလပ်၊ 2013) ။ စိတ်သဘောကိုပျိုးထောင်ပေးခြင်းသည်အလိုအလျောက်လေယာဉ်မှူးအပြုအမူများလျော့နည်းသွားစေနိုင်သည် (Witkiewitz et al ။ , 2014) ။ သတိရလိင်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတွင်ပါဝင်ခြင်း (Blycker & Potenza, 2018; ခန်းမ, 2019; ဗန်ဂေါ်ဒွန် et al ။ , 2016) အပြာစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်စပ်သောစိတ်ကူးယဉ်ခြင်း (ဥပမာ - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအမှတ်တရများကိုစိတ်ကူးယဉ်ရန်မလိုဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း) အပေါ်မှီခိုခြင်းမရှိဘဲလိင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုအပြာစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်စပ်သည့်အချက်အလက်များကို ကျော်လွန်၍ လိင်တုန့်ပြန်မှုအားခွင့်ပြုနိုင်သည်။
ပြင်ပအရင်းအမြစ်များအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းကိုတားဆီးခြင်းကဲ့သို့သောအတားအဆီးများကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည်အသုံးဝင်သည်ဟုဆိုကြသည်။ သို့သော်လည်းလူမှုရေးဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုနှင့်တာ ၀ န်ခံမှုတို့သည်အဖွဲ့ဝင်များ၏ abstinence ကိုရေရှည်တည်တံ့နိုင်စွမ်းအတွက်အဓိကကျသောပြင်ပအရင်းအမြစ်များဖြစ်သည်။ ဒီတွေ့ရှိချက်ကွဲပြားခြားနားသောနမူနာ (ယခင် Cavaglion, ပါဝင်သောယခင်အရည်အသွေးဆန်းစစ်ခြင်းများနှင့်အညီ) 2008ပယ်ရီ 2019; Ševčíková et al ။ , 2018အောင်မြင်သော asstinst ကိုကူညီခြင်းအတွက်လူမှုရေးအထောက်အပံ့၏အရေးပါသောအခန်းကဏ္edကိုမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ အသင်းအဖွဲ့များမှအသုံးပြုသော“ rebooting” ဖိုရမ်သည်အရေးကြီးဆုံးသောအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အသင်းအဖွဲ့များမှ၎င်းတို့ရှောင်ကြဉ်မှုကိုအောင်မြင်စွာထိန်းသိမ်းနိုင်စေသည်။ သူတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုဂျာနယ်များတွင်ရိုးရိုးသားသားမျှဝေခြင်း၊ အခြားအသင်း ၀ င်များ၏ဂျာနယ်များကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်အခြားအဖွဲ့ဝင်များမှအားပေးအားမြှောက်ပြုသည့်သတင်းစကားများရရှိခြင်းသည်မျက်နှာချင်းဆိုင်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုမရှိသော်လည်းလူမှုရေးအထောက်အပံ့နှင့်တာ ၀ န်ခံမှုကိုအားကောင်းစေသည်။ ဤအချက်ကအွန်လိုင်းဖိုရမ်များအပေါ်စစ်မှန်သောအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်လူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အထောက်အကူပြုသောအုပ်စုများ (ဥပမာ ၁၂ ဆင့်ပါအုပ်စုများ) အတွက်အလားအလာရှိသောအလားအလာရှိသောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဤအွန်လိုင်းဖိုရမ်များကအမည်ဝှက်ခြင်းကအားသာချက်တစ်ခုပင်ဖြစ်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဆန့်ကျင်။ စိတ်ရှုပ်စေသောသို့မဟုတ်ရှက်ရွံ့နေသောပြproblemsနာများရှိသူတို့အတွက်၎င်းတို့၏ပြproblemsနာများကိုအသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်အွန်လိုင်းမှအထောက်အပံ့ရယူရန်မှာပိုမိုလွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ 2000) ။ ဖိုရမ်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုနိုင်မှုသည်လိုအပ်ချက်ပေါ်ပေါက်လာသောအခါအဖွဲ့ဝင်များသည်၎င်းတို့၏ဂျာနယ်များတွင်တင်ထားနိုင်အောင်သေချာစေသည်။ ထူးဆန်းသည်မှာဝိသေသလက္ခဏာများ (အသုံးပြုနိုင်မှု၊ အမည်ဝှက်ခြင်းနှင့်တတ်နိုင်ခြင်း၊ Cooper၊ 1998အသင်း ၀ င်များ၏ပြaticနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဖိုရမ်၏ကုထုံးတန်ဖိုးကိုထပ်မံတိုးမြှင့်ပေးသောတူညီသောဝိသေသလက္ခဏာများသည်ယခုပြtheseနာများမှပြန်လည်နာလန်ထူလာစေရန်ကူညီခြင်းဖြစ်သည် (Griffiths, 2005).
abstinence ကိုဆက်လက်စွဲစွဲမြဲမြဲပြုလုပ်သောအသင်းဝင်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့် abstinence သည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောအတွေ့အကြုံဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပြီး၎င်းတို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းမှရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုတင်ပြကြသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုနိုင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများမိမိကိုယ်ကိုထိရောက်မှုကိုရှောင်ခြင်း (Kraus, Rosenberg, Martino, Nich, & Potenza,) 2017) သို့မဟုတ်အထွေထွေအထွေထွေချုပ်တည်းမှု (Muraven၊ 2010) အချို့သောအသင်းဝင်များကရှောင်ကြဉ်ခြင်းကိုအောင်မြင်သောကာလများမှဖော်ပြခဲ့သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လူမှုရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်တိုးတက်မှုများ (ဥပမာ - စိတ်နေစိတ်ထားတိုးတက်လာခြင်း၊ လှုံ့ဆော်မှုတိုးလာခြင်း၊ ဆက်ဆံရေးတိုးတက်မှုများ) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများ (ဥပမာလိင်ဆက်ဆံမှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော erectile လုပ်ဆောင်မှု) တို့ကိုလည်းဖော်ပြထားသည်။
အဖွဲ့ဝင်များမှရှောင်ကြဉ်ခြင်း၏အပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကအမျိုးမျိုးသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် PPU အတွက်အကျိုးရှိသောကြား ၀ င်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကိုဖယ်ရှားခြင်းမှရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများသည်အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုစီ၏သက်တမ်းအရှည်နှင့်စမ်းသပ်ဒီဇိုင်းများကို အသုံးပြု၍ နောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှုများမရှိပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသတ်မှတ်နိုင်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, ရှောင်ကြဉ်နေစဉ်အတွင်းအခြားကြားဝင်အချက်များထိုကဲ့သို့သောအပြုသဘောလူနေမှုပုံစံစတဲ့အပြောင်းအလဲတွေလုပ်, ဖိုရမ်အပေါ်ထောက်ခံမှုကိုလက်ခံရရှိသို့မဟုတ်ယေဘုယျအားဖြင့်သာ။ ကြီးမြတ် Self- စည်းကမ်းကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအပြုသဘောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုကိုအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ သို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများ (ဥပမာစိတ်ဓာတ်ကျခြင်း (သို့) စိုးရိမ်စိတ်များလျှော့ချခြင်း) နှင့် / သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ (ဥပမာ၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအကြိမ်ရေလျှော့ချခြင်း) ကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းကလိင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတိုးတက်စေရန်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုသီးခြားခွဲခြားထားသည့်အနာဂတ်ကျပန်းထိန်းချုပ်ထားသောလေ့လာမှုများ (Fernandez et al ။ , 2020; Wilson က, 2016) အထူးသဖြင့်ဤအထူးရိပ်မိသည့်အကျိုးခံစားခွင့်တစ်ခုချင်းစီကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့် ဆက်စပ်၍ ရနိုင်ခြင်းရှိ၊ မရှိကိုမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြရန်လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်လက်ရှိလေ့လာမှုပုံစံသည်အဓိကအားဖြင့် abstinence ၏အပြုသဘောသက်ရောက်မှုများကိုလေ့လာခြင်းနှင့်သိသာသောဆိုးကျိုးများအတွက်လျော့နည်းခြင်းတို့ကိုခွင့်ပြုခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုသို့သောနမူနာသည် abstinence နှင့် online forum အကြားအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုတွေ့ရှိခဲ့သောအသင်း ၀ င်များကိုအလွန်အမင်းထင်မြင်မိခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ asstinence နှင့် / သို့မဟုတ် online forum အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သောအသင်းဝင်များသည်သူတို့၏အပျက်သဘောဆောင်သောအတွေ့အကြုံများနှင့်အမြင်များကိုဖော်ပြမည့်အစားသူတို့၏ဂျာနယ်များတွင်တင်ခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်ရုံသာရှိခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတွင်အထင်မသေးပါ။ abstinence (နှင့်“ rebooting”) ကို PPU အတွက် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုအဖြစ်သင့်လျော်စွာအကဲဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်ရှောင်ကြဉ်ခြင်း၏ဆိုးရွားသောသို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်သောအကျိုးဆက်များရှိခြင်းကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုရည်မှန်းချက်အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ် abstinence ရည်မှန်းချက်ကိုတိတိကျကျချဉ်းကပ်ခြင်းရှိမရှိဆန်းစစ်ရန်အရေးကြီးသည် ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အပြာစာပေရုပ်ပုံများ (သို့မဟုတ်အပြာစာပေများအတွက်အတွေးများနှင့် / သို့မဟုတ်စွဲလမ်းမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်မည်သည့်အရာ) ကိုမဆိုရှောင်ရှားရန်ရည်မှန်းချက်ကိုအလွန်အမင်းအာရုံစူးစိုက်ထားခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပိုမိုအာရုံစူးစိုက်နိုင်သည် (Borgogna & McDermott, 2018; မော့စ်, Erskine, Albery, Allen, & Georgiou, 2015; ပယ်ရီ 2019; Wegner, 1994), သို့မဟုတ်ဆုတ်ခွာ, တဏှာသို့မဟုတ်ချို့ယွင်းနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဘို့ထိရောက်သောကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကျွမ်းကျင်မှုသင်ယူစရာမလိုဘဲ abstinence ကြိုးစားနေ, ကောင်းကျိုးထက်ပို။ ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ် (Fernandez et al ။ , 2020) ။ PPU ကိုချဉ်းကပ်ခြင်းအဖြစ်ရှောင်ကြဉ်ခြင်းကိုအနာဂတ်သုတေသနတွင်အလားအလာကောင်းသည့်ဆိုးကျိုးများအပြင်အလားအလာရှိသောဆိုးကျိုးများကိုပါထည့်တွက်သင့်သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ရှောင်ကြဉ်ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်ဟုယူဆရသောအချက်သည်သုတေသီများနှင့်ဆရာဝန်များအတွက်စဉ်းစားရန်အရေးကြီးသောမေးခွန်းတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာသည်။ PPU ကိုဖြေရှင်းရန်အမြဲတမ်းလိုအပ်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုလုံးဝရှောင်ကြဉ်ရန်လော။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ဆက်စပ်သောပြproblemsနာများမှ (ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခြင်း) မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်စပ်သောပြfromနာများမှပြန်လည်နာလန်ထူရန်အတွက်လျှော့ချခြင်း / ထိန်းချုပ်ထားသောအသုံးပြုမှုချဉ်းကပ်မှုအတွက်အဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာရိတ္တစွဲလမ်းမှုကြောင့်လက်လှမ်းမမှီနိုင်ဟုယုံကြည်မှုကြောင့်အနည်းငယ်မျှသာစဉ်းစားပုံရသည်။ - စွဲလမ်းစေသော / ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်အဆင့် (၁၂) ဆင့်ပါသောချဉ်းကပ်မှုကိုသတိရစေသည် (Efrati & Gola, 2018) ။ PPU အတွက်လက်တွေ့ဆောင်ရွက်မှုများအတွင်းလျှော့ချခြင်း / ထိန်းချုပ်ထားသောအသုံးပြုမှုရည်မှန်းချက်များကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ရည်မှန်းချက်များ (ဥပမာ Twohig & Crosby၊ 2010) ။ အချို့သောသုတေသီများက PPU နှင့်ပတ်သက်သောအချို့သူများအတွက် abstinin သည်လက်တွေ့ကျကျကြားဝင်ဖြန်ဖြေရေးရည်မှန်းချက်မဟုတ်ကြောင်းစိုးရိမ်မှုများကိုမကြာသေးမီကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်၎င်းသည်ရိပ်မိလျှင်မည်မျှခက်ခဲကြောင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုကိုယ်တိုင်လက်ခံခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းကဲ့သို့သောပန်းတိုင်များကို ဦး စားပေးရန်အဆိုပြုသည်။ abstinence ကိုသုံးပါ (Sniewski & Farvid ကိုကြည့်ပါ။ ) 2019) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များကပင်ကိုစရိုက်ကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုလုံးဝမကြည့်ရှုရန်လှုံ့ဆော်ခံရသူများအတွက်မူ ဆက်လက်၍ စွဲစွဲမြဲမြဲရှိပါကခက်ခဲသော်လည်းအခက်အခဲရှိခြင်းသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ ထို့အပြင်လက်ခံခြင်းနှင့်ရှောင်ကြဉ်ခြင်းတို့သည်အပြန်အလှန်သီးသန့်ရည်မှန်းချက်မထားသင့်ပါ။ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုသူသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေမပါသောဘဝကိုတန်ဖိုးထားပါကအထင်အရှားရပ်တည်ရန်ဆန္ဒရှိနေစဉ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူသည်မိမိကိုယ်ကိုနှင့်သူတို့၏အခြေအနေကိုလက်ခံရန်သင်ယူနိုင်သည် (Twohig & Crosby, 2010) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုလျှော့ချခြင်း / ထိန်းချုပ်ခြင်းကို အသုံးပြု၍ ရရှိနိုင်ပါက၎င်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်အလားတူအကျိုးရှိသောရလဒ်များထွက်ပေါ်လာနိုင်ပါကကိစ္စရပ်အားလုံးတွင်ရှောင်ကြဉ်ရန်မလိုအပ်ပေ။ PPU မှပြန်လည်နာလန်ထူရေးချဉ်းကပ်မှု၏အားသာချက်များနှင့် / သို့မဟုတ်အားနည်းချက်များကိုရှင်းလင်းစွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်နှင့်တားဆီးပိတ်ပင်ခြင်းနှင့်လျှော့ချခြင်း / ထိန်းချုပ်ထားသောအသုံးပြုမှုကြားဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းရည်မှန်းချက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနာဂတ်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုကိုသုတေသနပြုရန်လိုအပ်သည်။ PPU ပိုမိုပြင်းထန်ဖြစ်ပွားမှုများအတွက်ရလဒ်များ) ။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏အားသာချက်များပါဝင်သည်: ဓာတ်ပေါင်းဖိုဖယ်ရှားပစ်သော (1) အတားအဆီးဒေတာစုဆောင်းခြင်း; (၂) ပြန်လည်သိမ်းဆည်းမှုဘက်လိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေသည့်ရှောင်ကြဉ်ခြင်း၏နောက်ကြောင်းပြန်အကောင့်များအစားဂျာနယ်များကိုဆန်းစစ်ခြင်း၊ (၃) ကျယ်ပြန့်စွာပါဝင်နိုင်သည့်အသက်အရွယ်အုပ်စုများ၊ ကြားခံကြိုးပမ်းမှုကြာရှည်ခြင်းနှင့်ဤပြောင်းလဲမှုများကိုဖြတ်တောက်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းအတွေ့အကြုံ၏တူညီသည့်အရာများမှမြေပုံထုတ်ခြင်းအတွက်တားဆီးထားသည့်ပန်းတိုင်များအပါအ ၀ င်ကျယ်ပြန့်စွာပါဝင်မှုစံနှုန်းများ။ သို့သော်လေ့လာမှုတွင်အကန့်အသတ်ရှိသည်။ ပထမ ဦး စွာ, အတားအဆီးမရှိဒေတာစုဆောင်းခြင်းကျနော်တို့အဖွဲ့ဝင်များကသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံများနှင့်ပတ်သက်။ မေးခွန်းများကိုမမေးနိုင်ဘူးဆိုလို; ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည်အဖွဲ့ဝင်များကသူတို့ဂျာနယ်များတွင်ရေးသားရန်ရွေးချယ်သောအကြောင်းအရာနှင့်သာကန့်သတ်ထားသည်။ ဒုတိယအနေဖြင့်စံသတ်မှတ်ထားသောအတိုင်းအတာများမသုံးဘဲရောဂါလက္ခဏာများကိုပုဂ္ဂလဒိevaluation္ဌာန်အကဲဖြတ်ခြင်းသည်အသင်းဝင်များ၏မိမိကိုယ်ကိုအစီရင်ခံခြင်း၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုကန့်သတ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်သုတေသနပြုချက်က“ Erectile dysfunction” လို့သင်ထင်သလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတယ်။ International Erectile Functional Index (IIEF-2; Rosen, Cappelleri, Smith, Lipsky, & Pena) နှင့်အမြဲတမ်းကိုက်ညီမှုမရှိပါ။ 1999) ရမှတ်များ (ဝူ et al ။ , 2007).
ယခုလေ့လာမှုသည်“ rebooting” လှုပ်ရှားမှု၏ထူးခြားသောအပြာအပြာစာပေရုပ်ပုံကြည့်ရှုသူများ၏အတွေ့အကြုံများကိုထိုးထွင်းသိမြင်စေပြီးကိုယ်တိုင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်သက်ဆိုင်သောပြproblemsနာများကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားနေသည်။ လက်ရှိလေ့လာမှု၏တွေ့ရှိချက်များအရ (၁) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲသူများကို PPU ၏လက်တွေ့သဘောတရားကိုအသိပေးနိုင်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုရှောင်ရှားရန်တွန်းအားပေးနေသောပြproblemsနာများကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာနားလည်ရန်နှင့်သုတေသီများအတွက်အသုံးဝင်သည်။ PPU အတွက်ထိရောက်သောကြား ၀ င်ဆောင်ရွက်မှုများကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် PPU အတွက် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းများကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းအားနားလည်မှုကိုအသိပေးနိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာဆန်းစစ်မှုမှကောက်ချက်ဆွဲမှုသည်လေ့လာမှုနည်းစနစ် (ဥပမာအားဖြင့်အလယ်အလတ်အရင်းအမြစ်များကိုအရည်အသွေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု) တွင်ကန့်သတ်ချက်များကြောင့်သတိထားရမည်။ ဤပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း၏တွေ့ရှိချက်များအားအတည်ပြုရန်နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုရှောင်ရှားခြင်း၏အတွေ့အကြုံနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုတိကျသောသုတေသနမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်အတွက်“ rebooting” အသိုင်းအ ၀ ိုင်းမှအဖွဲ့ဝင်များကိုတက်ကြွစွာစုဆောင်းပြီးစနစ်တကျစစ်တမ်း / အင်တာဗျူးမေးခွန်းများကိုအသုံးပြုသောနောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှုများလိုအပ်သည်။ PPU ။
“ r /” ရှေ့ဆက်ပါသောဖိုရမ်များကို“ အကြောင်းအရာခွဲများ” ဟုသတ်မှတ်ထားသောလူမှုမီဒီယာဝက်ဘ်ဆိုက် Reddit ရှိ“ subreddits” အွန်လိုင်းအသိုင်းအဝိုင်းများဟုခေါ်သည်။
ဖိုရမ်တွင်အမျိုးသမီးဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်များအတွက်သီးခြားကဏ္ is ရှိသော်လည်းဂျာနယ်အများစုမှာအမျိုးသားဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည်။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးဂျာနယ်များ၏အချိုးအစားမညီမျှမှုသည်ယခင်သုတေသနပြုချက်ကိုထင်ဟပ်စေပြီးအမျိုးသားများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုနှုန်းပိုမိုမြင့်မားကြောင်းဖော်ပြသည် (ဥပမာ Hald၊ 2006; Kvalem et al ။ , 2014; Regnerus et al ။ , 2016), PPU (ဥပမာ, Grubbs et al ။ , 2019a; Kor et al ။ , 2014) နှင့် PPU အတွက်ကုသမှုရှာဖွေခြင်း (Lewczuk, Szmyd, Skorko, & Gola, 2017) မိန်းမတို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ PPU အတွက်ကုသမှုကိုရှာဖွေသည့်ခန့်မှန်းသူများ၏ကျား၊ မကွဲပြားမှု (ဥပမာ - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှင့်ဘာသာရေးသည်အမျိုးသမီးများအတွက်ကုသမှုရှာဖွေခြင်းကိုသိသိသာသာကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သော်လည်းယောက်ျားများမဟုတ်ပါ။ Gola, Lewczuk, & Skorko) 2016; Lewczuk et al ။ , 2017), အလားတူ "rebooting" ဖိုရမ်များတွင်ယောက်ျားမိန်းမတို့အကြား abstinence တွန်းအားနှင့်အတွေ့အကြုံများအတွက်အရေးကြီးသောကွဲပြားခြားနားမှုရှိပေမည်။
“ rebooting” ၏ရိပ်မိသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများသည် abstinence ကြိုးပမ်းမှု၏ပထမနှစ်အတွင်းတွင်တွေ့မြင်နိုင်လိမ့်မည်ဟုကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာမျှော်လင့်နိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၂ လကြာ cutoff point ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အလွန်ရှည်လျားပြီးရေရှည်ရပ်တည်ရန်ကြိုးပမ်းမှုများ (> ၁၂ လ) ကိုဖော်ပြသည့်ဂျာနယ်များသည်မည်မျှကြာမြင့်သည်နှင့်အသေးစိတ်မှုရှိသဖြင့်အနည်းဆုံးစုစုပေါင်းဂျာနယ်အရေအတွက်အားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်လိုအပ်သည်၊
အသင်း ၀ င်များသည်စနစ်တကျရှိသောမေးခွန်းများစာရင်းကိုတုန့်ပြန်ခြင်းမရှိသောကြောင့်နမူနာကျန်အပိုင်းများမှအတွေ့အကြုံများကိုအတူတူမျှဝေခြင်း (မျှဝေခြင်းမပြုခြင်း) ကိုသူတို့မအစီရင်ခံပါကဆုံးဖြတ်ရန်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းသတိရသင့်သည်။ အကျိုးဆက်အားကြိမ်နှုန်းကိုဖော်ပြသောသို့မဟုတ်ကြိမ်နှုန်းကိုဖော်ပြသောဝေါဟာရများကိုဖော်ပြသည့်အခါ၎င်းတို့သည်အတွေ့အကြုံကိုတင်ပြသောနမူနာတွင်ပါဝင်သူများ၏အနည်းဆုံးအချိုးအစားအဖြစ်ကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ကြသည်။ သို့သော်အတွေ့အကြုံရှိသူအမှန်တကယ်အရေအတွက်သည်ပိုမိုကြီးမားနိုင်သည်။
Beutel, ME, Stöbel-Richter, Y. , & Brähler, အီး (၂၀၀၈) ။ လိင်မှုဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများသည် ၄ ​​င်းတို့၏သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံး - ကိုယ်စားပြုဂျာမန်အသိုင်းအဝိုင်းစစ်တမ်းမှရလဒ်များ။ BJU အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ, 101(1), 76-82 ။
Blycker, GR, & Potenza, MN (2018) ။ စိတ်ကျန်းမာရေး၏စိတ်ကိုမော်ဒယ်: တစ် ဦး ကပြန်လည်သုံးသပ်နှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ကုသမှုများအတွက်မော်ဒယ်၏ဂယက်ရိုက်။ အပြုအမူစွဲ၏ဂျာနယ်, 7(4), 917-929 ။
PubMed PubMed ဗဟို ဆောင်းပါး Google Scholar
Borgogna, NC, & McDermott, RC (2018) ။ ပြgenderနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းတွင်ကျား၊ မအတွေ့အကြုံမှရှောင်ရှားနိုင်မှု၊ လိင်စွဲခြင်းနှင့် 25(4), 319-344 ။
ဆောင်းပါး Google Scholar
Bőthe, ခ, Tóth-Király, ဗြဲ, Potenza, MN, Orosz, G. အ, & Demetrovics, Z. (2020) ။ ကြိမ်နှုန်းမြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းသည်အမြဲတမ်းပြproblemနာမဖြစ်နိုင်ပါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်, 17(4), 793-811 ။
Bőthe, ခ, Tóth-Király, ဗြဲ, Zsila, Á။ , Griffiths က, MD, Demetrovics, Z. , & Orosz, G. အ (2018) ။ ပြtheနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုပမာဏ (PPCS) ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 55(3), 395-406 ။
PubMed ဆောင်းပါး Google Scholar
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမ်, Wegmann, အီး, Stark, R. , Müller, အေ, Wölfling, K. , Robbins, TW, & Potenza, MN (2019) ။ စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများအတွက် Person-Affect-Cognition-Execution (I-PACE) မော်ဒယ်၏အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု - အင်တာနက်အသုံးပြုမှုမမှန်မှုများမှအပစွဲလမ်းနေသည့်အပြုအမူများအားအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ အထွေထွေနှင့်စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများလုပ်ငန်းစဉ်၏ဖော်ပြချက်။ neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, 104, 1-10 ။
Braun, V. , & Clarke, V. (2006) ။ စိတ်ပညာအတွက်အကြောင်းအရာအလိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအသုံးပြုခြင်း။ စိတ်ပညာအတွက်အရည်အသွေးသုတေသန, 3(2), 77-101 ။
Braun, V. , & Clarke, V. (2013) ။ အောင်မြင်သောအရည်အသွေးသုတေသန - အစပြုသူများအတွက်လက်တွေ့လမ်းညွှန်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့: Sage ။
ဗြိတိသျှစိတ်ပညာအသင်း။ (2017) ။ အင်တာနက် -mediated သုတေသနများအတွက်ကျင့်ဝတ်လမ်းညွှန်ချက်များ။ Leicester, ဗြိတိန်: ဗြိတိန်စိတ်ပညာ Society က။
Bronner, G. , & Ben-Zion, IZ (၂၀၁၄) ။ လူငယ်များအနေဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ရောဂါနှင့်ကုသမှုတွင် etiological Factor အဖြစ်ပုံမှန်မဟုတ်သောတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်, 11(7), 1798-1806 ။
Burke က K. , & Haltom, TM (2020) ။ ဘုရားသခင့်ဖန်တီးမှုနှင့် porn ဖြင့်ကြိုးတပ်ခြင်း - ဘာသာရေးအမျိုးသားများ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစွဲစွဲလမ်းမှုပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း၏ဇာတ်ကြောင်းများတွင်ရွေးနုတ်ခြင်းပုလ်နှင့်ကျား၊ မယုံကြည်မှုများ။ ကျား၊ မ၊ 34(2), 233-258 ။
Cavaglion, G. အ (2008) ။ cyberporn မှီခိုသူများကိုကူညီသည့်ဇာတ်ကြောင်းများ။ လိင်စွဲခြင်းနှင့် 15(3), 195-216 ။
Cavaglion, G. အ (2009) ။ Cyber-porn မှီခိုမှု - အီတလီအင်တာနက်မိမိကိုယ်ကိုကူညီသောလူမှုအသိုင်းအဝိုင်း၌စိတ်သောကရောက်စရာအသံများ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်စွဲမှု၏အင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်, 7(2), 295-310 ။
Cooper က, အေ (1998) ။ လိင်နှင့်အင်တာနက်: သစ်ကိုထောင်စုနှစ်သို့ surfing ။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ၊ 1(2), 187-193 ။
Coyle, အေ (2015) ။ အရည်အသွေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုတေသနမှနိဒါန်း။ အီးလီယွန် & အေ Coyle (Eds ။ ) ၌တည်၏, စိတ်ပညာအတွက်အရည်အသွေးဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (2nd ed ။ , စစ။ 9-30) ။ သောင်းချီသပိတ်, CA: Sage ။
Deem, G. အ (2014a) ။ Nation ဝေါဟာရကိုပြန်ဖွင့်ပါ။ မှ, Aprilပြီလ 27, 2020, ရယူရန် http://www.rebootnation.org/forum/index.php?topic=21.0
Deem, G. အ (2014b) ။ rebooting ၏အခြေခံ။ မှ, Aprilပြီလ 27, 2020, ရယူရန် http://www.rebootnation.org/forum/index.php?topic=67.0
Diefendorf, အက်စ် (2015) ။ မင်္ဂလာဆောင်ညဥ့်ပြီးနောက်: ဘဝသင်တန်းကျော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်ပုလ်။ ကျား၊ မ၊ 29(5), 647-669 ။
Dwulit, အေဒီ, & Rzymski, P. (2019a) ။ ပိုလန်တက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားများအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှု၏ပျံ့နှံ့မှု၊ ပုံစံများနှင့်မိမိကိုယ်ကိုရိပ်မိသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ - ကဏ္crossအလိုက်လေ့လာမှု။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သုတေသနနှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်၊ 16(10), 1861 ။
PubMed ဗဟို ဆောင်းပါး PubMed Google Scholar
Dwulit, အေဒီ, & Rzymski, P. (2019b) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအသင်းအဖွဲ့များသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများနှင့်အတူအသုံးပြုသည်။ လက်တွေ့ဆေးပညာဂျာနယ်, 8(7), 914 ။ https://doi.org/10.3390/jcm8070914
Efrati, Y. (2019) ။ ဘုရားသခင်၊ ငါလိင်အကြောင်းမစဉ်းစားတော့ဘူး။ ဘာသာရေးဆယ်ကျော်သက်များအကြားလိင်ဆိုင်ရာအတွေးအခေါ်များကိုမအောင်မြင်သောဖိနှိပ်မှုကြောင့်ပြန်လည်နိုးထလာခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 56(2), 146-155 ။
Efrati, Y. , & Gola, အမ် (2018) ။ compulsive လိင်အပြုအမူ: တစ် ဦး ကတဆယ်နှစ်လုံးကိုခြေလှမ်းကုထုံးချဉ်းကပ်မှု။ အပြုအမူစွဲ၏ဂျာနယ်, 7(2), 445-453 ။
Eysenbach, G. အ, & မှီတိုင်အောင်, JE (2001) ။ အင်တာနက်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအပေါ်အရည်အသွေးသုတေသနအတွက်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ။ ဗြိတိသျှဆေးပညာဂျာနယ်, 323(7321), 1103-1105 ။
ဖာနန်ဒက်ဇ, DP, & Griffiths က, MD (2019) ။ ပြproblemနာအပြာစာပေရုပ်ပုံကြည့်ရှုခြင်းအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတူရိယာများ - စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးပညာရှင်များ. https://doi.org/10.1177/0163278719861688.
ဖာနန်ဒက်ဇ, DP, Kuss, DJ သမား, & Griffiths က, MD (2020) ။ အလားအလာရှိသောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများကို ဖြတ်၍ ကာလတိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများ - စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း လက်တွေ့စိတ်ပညာပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, 76, 101828 ။
Fernandez, DP, Tee, EY, & Fernandez, EF (2017) ။ ဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည် ၉ ခုရမှတ်ကို အသုံးပြု၍ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုကိုအမှန်တကယ်မဖြစ်မနေရောင်ပြန်ဟပ်ပါသလား။ abstinence အားထုတ်မှု၏အခန်းကဏ္Explကိုစူးစမ်း။ လိင်စွဲခြင်းနှင့် 24(3), 156-179 ။
Gola, အမ်, Lewczuk, K. , & Skorko, အမ် (2016) ။ အဘယ်အရာကအရေးကြီးသနည်း - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေပမာဏ၏အရည်အသွေးသို့မဟုတ်အရည်အသွေးကဘာလဲ။ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ကုသမှုရှာဖွေရန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအချက်များ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်, 13(5), 815-824 ။
Griffiths က, MD (2005) ။ စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများအတွက်အွန်လိုင်းကုထုံး။ CyberPsychology နှင့်အပြုအမူ, 8(6), 555-561 ။
Grubbs, JB, Kraus, SW, & Perry, SL (2019a) ။ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်ကိုယ်စားပြုသောနမူနာတစ်ခုမှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကိုယ်တိုင်တင်ပြသည့်စွဲချက် - အသုံးပြုမှုအလေ့အထများ၊ ဘာသာရေးနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုများ။ အပြုအမူစွဲ၏ဂျာနယ်, 8(1), 88-93 ။
Grubbs, JB, & Perry, SL (2019) ။ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း - ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ပေါင်းစည်းခြင်း။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 56(1), 29-37 ။
Grubbs, JB, Perry, SL, Wilt, JA, & Reid, RC (2019b) ။ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုကြောင့်အပြာစာပေပြproblemsနာများ - စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် meta-analysis ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသောပုံစံ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 48(2), 397-415 ။
Grubbs, JB, Volk, F. , Exline, JJ, & Pargament, KI (2015) ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း - စွဲစွဲလမ်းမှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှုနှင့်အတိုချုပ်အတိုင်းအတာကိုအတည်ပြုခြင်း။ လိင်နှင့်အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 41(1), 83-106 ။
Hald, GM က (2006) ။ ငယ်ရွယ်လိင်ကွဲဒိန်းမတ်လူကြီးများအကြားတွင်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 35(5), 577-585 ။
ခန်းမ, P. (2019) ။ လိင်စွဲလမ်းနှင့်အတူရုန်းကန်သူတွေကိုနှင့်သူတို့ကိုကူညီချင်သောသူတို့အဘို့အဖြေပြည့်စုံလမ်းညွှန်: လိင်စွဲနားလည်မှုနှင့်ကုသ (2nd ed ။ ) ။ နယူးယောက်: Routledge ။
Hartmann, အမ် (2020) ။ heterosex ၏စုစုပေါင်း meritocracy: NoFap အတွက်ဘာသာရပ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ. https://doi.org/10.1177/1363460720932387.
Holtz, P. , Kronberger, N. , & Wagner, ဒဗလျူ (2012) ။ အင်တာနက်ဖိုရမ်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း - လက်တွေ့ကျတဲ့လမ်းညွှန်။ မီဒီယာစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 24(2), 55-66 ။
Imhoff, R. , & Zimmer, အက်ဖ် (2020) ။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရသည့်အမျိုးသားများ၏အကြောင်းပြချက်များသည်“ reboot” ၀ ဘ်ဆိုဒ်များကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိနိုင်ပါ။ [Editor to Letter] လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 49, 1429-1430 ။ https://doi.org/10.1007/s10508-020-01722-x.
Kohut, တီ, Fisher, WA, & ကမ့်ဘဲလ်, အယ်လ် (2017) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ - ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ ပါ ၀ င်သူများ - အသိပေးထားသော၊ “ အောက်မှအပေါ်သို့” သုတေသန၏ကန ဦး တွေ့ရှိချက်များ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 46(2), 585-602 ။
Kor, အေ, Zilcha-Mano, အက်စ်, Fogel, YA, Mikulincer, အမ်, ရိဒ်, RC, & Potenza, MN (2014) ။ ပြProbleနာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုစကေး၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူ, 39(5), 861-868 ။
Kraus, SW, Rosenberg, အိပ်ချ်, Martino, အက်စ်, Nich, C. , & Potenza, MN (2017) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအသုံးပြုမှုကိုရှောင်ရှားရန်မိမိကိုယ်ကိုထိရောက်မှုအတိုင်းအတာကိုတီထွင်ခြင်းနှင့်ကန ဦး အကဲဖြတ်ခြင်း။ အပြုအမူစွဲ၏ဂျာနယ်, 6(3), 354-363 ။
Kraus, SW, & Sweeney, PJ (2019) ။ ပစ်မှတ်ကိုနှိပ်ခြင်း - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုပြသနာများအတွက်လူတစ် ဦး ချင်းစီကိုကုသရာတွင်ကွဲပြားခြားနားသောရောဂါရှာဖွေရေးအတွက်စဉ်းစားခြင်း။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 48(2), 431-435 ။
Kvalem, IL, Træen, B. , Lewin, B. , & Štulhofer, အေ (၂၀၁၄) ။ ငယ်ရွယ်သောစကင်ဒီနေးဗီးယားအရွယ်ရောက်သူများအကြားအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း၊ လိင်အင်္ဂါရုပ်သွင်ပြင်ကျေနပ်မှုနှင့်လိင်ဆိုင်ရာမိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှု၏ကိုယ်ပိုင်အမြင် Cyberpsychology: ဆိုက်ဘာစပေ့အပေါ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုတေသနဂျာနယ်, 8(4) ။ https://doi.org/10.5817/CP2014-4-4.
လမ်းဘတ်၊ မင်၊ နဂတ်စ်၊ အက်စ်၊ Stillman၊ TF၊ Olmstead, SB, & Fincham, FD (2012) ။ ကြာရှည်မခံသောချစ်ခြင်းမေတ္တာ - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများစားသုံးခြင်းနှင့်မိမိ၏အချစ်ဆုံးအဖော်အားကတိကဝတ်ပြုခြင်းအားလျော့နည်းစေသည်။ လူမှုရေးနှင့်လက်တွေ့စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 31(4), 410-438 ။
Lewczuk, K. , Szmyd, ဂျေ, Skorko, အမ်, & Gola, အမ် (2017) ။ အမျိုးသမီးများအကြားပြpornနာအပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုရန်ရှာဖွေခြင်း။ အပြုအမူစွဲ၏ဂျာနယ်, 6(4), 445-456 ။
Moss, AC, Erskine, JA, Albery, IP, Allen, JR, & Georgiou, GJ (2015) ။ ဖိနှိပ်ရန်သို့မဟုတ်မဖိရန်လော။ ဒါကဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ်မှုဖြစ်တယ်။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူ, 44, 65-70 ။
Muraven, အမ် (2010) ။ ချုပ်တည်းမှုတည်ဆောက်ခြင်း - ချုပ်တည်းခြင်းအားကျင့်သုံးခြင်းသည်မိမိကိုယ်ကိုချုပ်တည်းခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေသည်။ စမ်းသပ်လူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 46(2), 465-468 ။
Negash, အက်စ်, Sheppard, NVN, လမ်းဘတ်, မိုင်, & Fincham, FD (2016) ။ နောက်ပိုင်းတွင်ရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုရောင်းဝယ်ခြင်း - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသုံးစွဲခြင်းနှင့်လျှော့စျေးလျှော့ပေးခြင်း လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 53(6), 689-700 ။
NoFap.com (ကြိမ်မြောက်) ။ မှAprilပြီလ 27, 2020 ရယူရန်: https://www.nofap.com/rebooting/
Osadchiy, V. , Vanmali, B. , Shahinyan, R. , Mills, JN, & Eleswarapu, SV (2020) ။ ကိစ္စရပ်များကိုသူတို့လက်ထဲကိုင်တွယ်ခြင်း - အင်တာနက်ပေါ်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်း၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်မှရှောင်ခြင်း [Editor to Letter] ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 49, 1427-1428 ။ https://doi.org/10.1007/s10508-020-01728-5.
ဆောင်းပါး PubMed Google Scholar
ပန်းခြံ, BY, Wilson က, G. အ, ဘာဂါ, ဂျေ, Christman, အမ်, Reina, ခ, ဆရာတော်, အက်ဖ်, & Doan, AP (2016) ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေခြင်းလား လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူတစ် ဦး ကသုံးသပ်မှု။ အပြုအမူသိပ္ပံ, 6(3), 17 ။ https://doi.org/10.3390/bs6030017.
ဆောင်းပါး PubMed PubMed ဗဟို Google Scholar
ပယ်ရီ, SL (2019) ။ တပ်မက်စိတ်စွဲလမ်းမှု - ရှေးရိုးစွဲပရိုတက်စတင့်များ၏ဘ ၀ ၌ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ။ အောက်စဖို့ဒ: အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်နှိပ်ပါ။
Pornhub.com (2019) ။ အဆိုပါ 2019 ပြန်လည်သုံးသပ်အတွက်တစ်နှစ်။ မှ, Aprilပြီလ 27, 2020, ရယူရန် https://www.pornhub.com/insights/2019-year-in-review
ပေါ်တို, R. (2016) ။ masturbatoires နှင့်ကမောက်ကမဖြစ်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုလ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 25(4), 160-165 ။
Putnam, DE, & Maheu, MM (2000) ။ အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုနှင့်အနိုင်ကျင့်မှု - ဝက်ဘ်အရင်းအမြစ်များနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာ telehealth တို့ကိုကုသမှုတွင်ပေါင်းစည်းခြင်း။ လိင်စွဲခြင်းနှင့် 7(1-2), 91-112 ။
r / NoFap ။ (2020) ။ မှ, Aprilပြီလ 27, 2020, ရယူရန် https://www.reddit.com/r/NoFap/
Nation ကို Reboot လုပ်ပါ။ (2020) ။ မှ, Aprilပြီလ 27, 2020, ရယူရန် https://rebootnation.org/
Regnerus, အမ်, ဂေါ်ဒွန်, D. , & စျေး, ဂျေ (2016) ။ အမေရိကရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း - နည်းစနစ်ဆိုင်ရာနည်းလမ်းများကိုနှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 53(7), 873-881 ။
Rissel, C တို့, ရစ်ချတာ, ဂျေ, De Visser, RO, McKee, အေ, Yeung, အေ, & Caruana, တီ (2017) ။ inစတြေးလျမှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများ၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်း - ဒုတိယသြစတြေးလျကျန်းမာရေးနှင့်ဆက်ဆံရေးလေ့လာမှုမှတွေ့ရှိချက်များ။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 54(2), 227-240 ။
ရို, RC, Cappelleri, JC, စမစ်, MD, Lipsky, ဂျေ, & Pena, BM (1999) ။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်ရောဂါရှာဖွေကိရိယာအဖြစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာအညွှန်း (IIEF-5) ၏အတိအကျ ၅ မျိုးရှိသည့်ဗားရှင်းအားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အကဲဖြတ်မှု။ International Impotence Research ဂျာနယ်၊ 11(6), 319-326 ။
Schneider, JP (2000) ။ cybersex သင်တန်းသားများကိုတစ် ဦး ကအရည်အသွေးလေ့လာမှု: ကျားကွဲပြားမှု, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်ကုထုံးများအတွက်သက်ရောက်မှု။ လိင်စွဲခြင်းနှင့် 7(4), 249-278 ။
Ševčíková, အေ, Blinka, L. , & Soukalová, V. (2018) ။ Sexaholics Anonymous နှင့် Sex စွဲသူများအမည်မသိသူများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အလွန်အကျွံအင်တာနက်အသုံးပြုခြင်း။ လိင်စွဲခြင်းနှင့် 25(1), 65-79 ။
Sniewski, အယ်လ်, & Farvid, P. (2019) ။ ကြားနေသို့မဟုတ်လက်ခံမှု? Self- ရိပ်မိပြproblemနာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုမှုကိုဖြေရှင်းခြင်းဖြင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းဖြင့်အမျိုးသားများ၏အတွေ့အကြုံများပါ ၀ င်သည်။ လိင်စွဲခြင်းနှင့် 26(3-4), 191-210 ။
Sniewski, အယ်လ်, & Farvid, P. (2020) ။ အရှက်ကွဲစွာဖုံးကွယ်ထားခြင်း - လိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားများ၏မိမိကိုယ်ကိုရိပ်မိသည့်ပြselfနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုအတွေ့အကြုံများ။ အမျိုးသားနှင့်ပုလ်စိတ်ပညာ, 21(2), 201-212 ။
တေလာ, K. (2019) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲစွဲစွဲလမ်းမှု - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါကူးစက်ခြင်းကိုပြုလုပ်သည်။ လူ့သိပ္ပံသမိုင်း, 32(5), 56-83 ။
တေလာ, K. (2020) ။ Nosology နှင့်ဥပစာစကား - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုသူများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုကိုမည်သို့နားလည်စေသနည်း။ လိင်၊ 23(4), 609-629 ။
တေလာ, K. , & ဂျက်ဆင်, အက်စ် (2018) ။ 'ငါအဲ့ဒီအာဏာကိုပြန်ရချင်တယ်' - အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုရှောင်ကြဉ်သည့်ဖိုရမ်တစ်ခုတွင်ပုလ်၏သရုပ်ဖော်မှု။ လိင်၊ 21(4), 621-639 ။
TEDx စကားပြောခန်း။ (2012 ခုနှစ်, မေလ 16) ။ အလွန်ကြီးစွာသော porn စမ်းသပ်မှု ဂယ်ရီ Wilson | TEDxGlasgow [ဗွီဒီယို] ။ YouTube https://www.youtube.com/watch?v=wSF82AwSDiU
Twohig, အမတ် & Crosby, JM (2010) ။ ပြpornနာရှိသောအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ကုသမှုတစ်ခုအဖြစ်လက်ခံခြင်းနှင့်ကတိက ၀ တ်ပြုခြင်းကုထုံး။ အပြုအမူကုထုံး, 41(3), 285-295 ။
Twohig, အမတ်, Crosby, JM, & Cox, JM (2009) ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုကြည့်ခြင်း - မည်သူသည်ပြproblemနာဖြစ်သနည်း၊ မည်သို့နှင့်အဘယ်ကြောင့်နည်း။ လိင်စွဲခြင်းနှင့် 16(4), 253-266 ။
Ussher, JM (1999) ။ အမျိုးစုံရခြင်းနှင့်နည်းစနစ်ဆိုင်ရာဗဟုဝါဒ။ အမျိုးသမီးသုတေသနအတွက်ရှေ့ဆက်ရမည့်လမ်း။ လပတ်အမျိုးသမီးများ၏စိတ်ပညာ, 23(1), 41-46 ။
Vaillancourt-Morel, အမတ်, Blais-Lecours, အက်စ်, Labadie, C တို့, Bergeron, အက်စ်, Sabourin, အက်စ်, & Godbout, N. (2017) ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်ဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာကောင်းကျိုးများအကြောင်း။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်, 14(1), 78-85 ။
ဗန်ဂေါ်ဒွန်, ဒဗလျူ, Shonin, အီး, & Griffiths က, MD (2016) ။ လိင်စွဲလမ်းမှုကိုကုသရန်တရားအားထုတ်ရန်အသိပညာပေးခြင်း။ အပြုအမူစွဲ၏ဂျာနယ်, 5(2), 363-372 ။
Vanmali, ခ, Osadchiy, V. , Shahinyan, R. , Mills က, ဂျေ, & Eleswarapu, အက်စ် (2020) ။ ကိစ္စရပ်များကိုမိမိတို့လက်ထဲကိုင်တွယ်ခြင်း - ပုံမှန်မဟုတ်သောအွန်လိုင်းကုထုံးအရင်းအမြစ်မှညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲစွဲလမ်းမှုအကြံဥာဏ်ကိုရှာဖွေနေသောအမျိုးသားများ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်, 17(1), S1 ။
Wegner, DM (1994) ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှု၏အီလက်ထရောနစ်ဖြစ်စဉ်များ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, 101(1), 34-52 ။
Wegner, DM, Schneider, DJ, Carter, SR, & White, TL (1987) ။ အတွေးဖိနှိပ်မှုဝိရောဓိသက်ရောက်မှု။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 53(1), 5-13 ။
Whitehead, LC (2007) ။ ကျန်းမာရေးကဏ္ Internet တွင်အင်တာနက် -mediated သုတေသနအတွက်အတိုင်းအတာများနှင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာပြissuesနာများ: စာပေတစ်ခုဘက်ပေါင်းစုံပြန်လည်သုံးသပ်။ လူမှုရေးသိပ္ပံနှင့်ဆေးပညာ, 65(4), 782-791 ။
Wilson က, G. အ (2014) ။ porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက်: အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်စွဲလမ်း၏ထွန်းသစ်စသိပ္ပံ။ Richmond, VA: Common Wealth Publishing ။
Wilson က, G. အ (2016) ။ ၎င်း၏ဆိုးကျိုးများကိုဖော်ပြရန်နာတာရှည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေအသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပါ။ Addicta: စွဲလမ်းမှုအပေါ်တူရကီဂျာနယ်, 3(2), 209-221 ။
Witkiewitz, K. , Bowen, S. , Douglas, H. , & Hsu, SH (2013) ။ ပစ္စည်းစွဲလမ်းမှုအတွက်စိတ်ကို အခြေခံ၍ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူ, 38(2), 1563-1571 ။
Witkiewitz, K. , Bowen, အက်စ်, Harrop, EN, ဒေါက်ဂလပ်, အိပ်ချ်, Enkema, အမ်, & Sedgwick, C. (2014) ။ စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများပြန်ဖြစ်ရန်တားဆီးရန်စိတ်ကိုအခြေခံသည့်ကုသမှု။ သီအိုရီဆိုင်ရာပုံစံများနှင့်ပြောင်းလဲမှု၏ယူဆချက်ယန္တရားများ။ ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုနှင့်အလွဲသုံးစားမှု, 49(5), 513-524 ။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ။ (2019) ။ ICD-11: ရောဂါအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခွဲခြား (11th ed ။ ) ။ မှ, Aprilပြီလ 24, 2020, ရယူရန် https://icd.who.int/browse11/l-m/en
ဝူ၊ CJ၊ Hsieh၊ JT, လင်း၊ JSN၊ သောမတ်စ်၊ ဗြဲ၊ ဟွမ်၊ အက်စ်၊ ဂျင်းနန်၊ BP၊ … Chen, KK (2007) နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော်သက်ကြီးရွယ်အိုထိုင်ဝမ်အမျိုးသားများအတွက် Erectile Function of Index (၅) ခုမှသတ်မှတ်ထားသော Self-အစီရင်ခံ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ပြခြင်း။ Urology, 69(4), 743-747 ။
Zimmer, အက်ဖ်, & Imhoff, R. (2020) ။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ခြင်း။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 49(4), 1333-1343 ။
စိတ်ပညာဌာန၊ Nottingham Trent တက္ကသိုလ်၊ ရှိတ်စပီးယားလမ်း ၅၀၊ နော့ဂ်ျဟမ်၊ NG50 1FQ၊ ယူကေ
ဒါဝိဒ်သည် P. ဖာနန်ဒက်, Daria ဂျေ Kuss & Mark D. Griffiths က
စာပေးစာယူမှ ဒါဝိဒ်သည် P. ဖာနန်ဒက်.
ဤလေ့လာမှုသည်အမည်မသိလူသိရှင်ကြားအချက်အလက်များအသုံးပြုသောကြောင့်၎င်းကို Nottingham Trent တက္ကသိုလ်၏သုတေသနကျင့်ဝတ်ကော်မတီမှအသိပေးအကြောင်းကြားထားသောခွင့်ပြုချက်မှကင်းလွတ်သည်ဟုယူဆသည်။
လူ့ပါ ၀ င်သူများပါ ၀ င်သောလေ့လာမှုများတွင်ပြုလုပ်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအားလုံးသည်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့် / သို့မဟုတ်အမျိုးသားသုတေသနကော်မတီ၏ကျင့် ၀ တ်စံနှုန်းများနှင့် ၁၉၆၄ ဟယ်လ်စင်ကီကြေငြာချက်နှင့်နောက်ပိုင်းပြင်ဆင်မှုများသို့မဟုတ်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သောကျင့်ဝတ်စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသည်။
Springer သဘာဝတရားထုတ်ဝေမြေပုံများနှင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဆက်နွယ်ပေါင်းစည်းမှုအတွက်တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာတောင်းဆိုမှုများနှင့် ပတ်သက်. ကြားနေဆဲဖြစ်သည်။
ဇယား4အသက်အုပ်စုများအလိုက်တွေ့ကြုံရသောအတွေ့အကြုံများ၏ကြိမ်နှုန်းတွင်သိသာထင်ရှားသောကွာခြားချက်များ
ပွင့်လင်း Access ကို ဤဆောင်းပါးသည် Creative Commons Attribution ၄.၀ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလိုင်စင်အောက်တွင်လိုင်စင်ရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ မူရင်းစာရေးသူ (များ) နှင့်သင့်တော်သောအရင်းအနှီးကိုသင့်အားပေးအပ်နေသရွေ့၊ Creative Commons လိုင်စင်ကိုချိတ်ဆက်ပါ၊ အပြောင်းအလဲများရှိမရှိကိုဖော်ပြပါ။ ဤဆောင်းပါး၌ပါသောရုပ်ပုံများသို့မဟုတ်အခြားတတိယပါတီပစ္စည်းများကိုဤစာတမ်း၏အကြွေးလိုင်းတွင်မဖော်ပြပါကစာမူ၏ Creative Commons လိုင်စင်တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ အကယ်၍ ပစ္စည်းသည်ဆောင်းပါး၏ Creative Commons လိုင်စင်တွင်မပါ ၀ င်ပါနှင့်သင်၏ရည်ရွယ်ထားသောအသုံးပြုမှုကိုပြဌာန်းထားသောစည်းမျဉ်းများကခွင့်မပြုပါသို့မဟုတ်ခွင့်ပြုထားသောအသုံးပြုမှုထက်ကျော်လွန်ပါကသင်သည်မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်ထံမှတိုက်ရိုက်ခွင့်ပြုချက်ရယူရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ဒီလိုင်စင်မိတ္တူကိုကြည့်ရန်ကြည့်ရှုပါ http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.